जापानमा सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गन्तव्यहरू! जाडो, वसन्त, गर्मी, शरद - Best of Japan
हकोडाट, होक्काइडो मा एक लोकप्रिय शहर = शटरस्टक
यस साइटमा, मसँग जापानको बिभिन्न ठाउँहरूमा व्यक्तिगत रुपमा परिचय गराउन पृष्ठहरू छन्। तपाईं पृष्ठहरूमा जान सक्नुहुन्छ मेनू हेरेर र तपाईंलाई रूचि भएको शीर्षकहरूमा क्लिक गरेर। तथापि, मैले यी पृष्ठहरू तल सूचीबद्ध गरें। निम्नलाई हेर्नुहोस् र यदि त्यहाँ तपाईंको रूचिको पृष्ठ छ, कृपया यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यो पृष्ठमा जानुहोस्। किनकि जापान उत्तर र दक्षिणमा धेरै फराकिलो देश हो, उत्तरमा होक्काइडो र दक्षिणी भागमा क्युशु र ओकिनावा एकदम फरक छन्। मलाई आशा छ कि तपाइँ तपाइँको मनपर्ने जापान मेरो साइट मा पाउनुहुनेछ।
१० सर्वश्रेष्ठ यात्रा कार्यक्रम: तपाई कहाँ जान चाहानुहुन्छ?
जापानमा यात्रा गर्दा सर्वश्रेष्ठ गन्तव्यहरू
तोहोकु क्षेत्र (होन्शुको उत्तरपूर्वी भाग)
कन्टो क्षेत्र (टोकियो वरिपरि）
चुबु क्षेत्र (केन्द्रीय होन्शु)
कन्साई क्षेत्र (क्योटो र ओसाकाको वरिपरि)
चुगोकु क्षेत्र (पश्चिमी होन्शु)
यदि तपाईं जापानमा कस्ता प्रकारका दर्शनीय स्थलहरूको अवलोकन गर्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया तलको पृष्ठ पढ्नुहोस्।
जब तपाईं जापान जानुहुन्छ, तपाईंले जापानमा कुन ठाउँमा जान चाहनुहुन्छ भनेर निर्णय गर्नुपर्नेछ। यसैले यस पृष्ठमा म गन्तव्यहरू परिचय गर्ने छु जुन सम्भवत जापानमा भ्रमण गर्ने मुख्य ठाउँहरू हुनसक्दछन्। यदि तपाईंसँग एक ठाउँ छ जहाँ तपाईं विशेष रूपमा जान चाहनुहुन्छ भने, तपाईं ...
जापानमा सब भन्दा लोकप्रिय गन्तव्यहरू निम्न छन्। स्लाइड छविहरू हेर्नुहोस् र तपाईंलाई रूचि भएको कुनै पनि ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्।
टोकियो जापानको राजधानी हो। जबकि परम्परागत संस्कृति अझै बाँकी छ, समकालीन नवीनता निरन्तर भइरहेको छ। कृपया आउनुहोस् र टोकियो भ्रमण गर्नुहोस् र ऊर्जा महसुस गर्नुहोस्। यस पृष्ठमा, म पर्यटन क्षेत्रहरू र टोकियोमा विशेष गरी लोकप्रिय दर्शनीय स्थलहरूको परिचय दिनेछु। यो पृष्ठ धेरै लामो छ। यदि तपाईं यो पृष्ठ पढ्नुहुन्छ भने, तपाईं टोकियोमा सबै मुख्य दर्शनीय ठाउँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको रुचिको क्षेत्र हेर्न कृपया तल सामग्रीको तालिका प्रयोग गर्नुहोस्। तलको दायाँ तिर एरो बटन क्लिक गरेर तपाईं यस पृष्ठको शीर्षमा फर्कन सक्नुहुनेछ। मैले सम्बन्धित लेखहरूमा लिंकहरू संलग्न गरें, त्यसैले यदि तपाईंसँग तपाईंको रुचिको क्षेत्र छ भने, कृपया सम्बन्धित लेखहरू पनि पढ्नुहोस्। >> तपाई माउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ? ? तल << तालिका TokyoAsakusaTokyo Skytree को ContentsOutline को (Oshiage) टोक्यो CruiseUenoRikugien GardenYanesen भिडियोमा दूरी मा फुजी: Yanaka, Nezu, SendagiRyogokuAkihabaraNihonbashiImperial महल (टोक्यो) MarunouchiGinzaTokyo टावर (Kamiyacho) RoppongiAkasakaOdaibaIkebukuroShinjuku Gyoen राष्ट्रीय GardenShinjukuMeiji Jingu ShrineJingu GaienHarajukuOmotesandoShibuyaEbisuTokyo डिज्नी Resort (Maihama, चिबा प्रान्त) टोकियोको रूपरेखा टोकियोको नक्शा जेआर ट्रेनको नक्शा यदि तपाईं टोकियो आउनुभयो र ट्रेन वा बस विन्डोबाट टोकियोको ल्यान्डस्केप देख्नुभयो भने तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ कि यो एकदम विशाल शहर हो। २० औं शताब्दीको उत्तरार्धदेखि टोकियो शहर विस्तार हुँदै गयो र यसको फलस्वरूप यो योकोहामा, सैतामा र चिबा जस्ता वरपरका शहरहरूमा सामेल भयो। परिणाम स्वरूप, टोकियोमा केन्द्रित टोकियो महानगर (मेगा शहर) अब जन्म भएको छ। टोकियो महानगरको जनसंख्या लगभग 20 करोड .० लाख पुगेको छ। त्यहाँ JR को नेटवर्क छ (पूर्व राज्य स्वामित्वको ...
होक्काइडो होन्शु पछि जापानको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो टापु हो। र यो उत्तरी र सबैभन्दा ठूलो प्रान्त हो। होक्काइडो जापानका अन्य टापुहरू भन्दा चिसो छ। किनकि जापानीले गरेको विकासमा ढिलाइ भएको छ, होक्काइडोमा विशाल र सुन्दर प्रकृति छ। यस पृष्ठमा, म होक्काइडोको रूपरेखा प्रस्तुत गर्नेछु। यदि तपाईं यस लामो लेख को अन्त मा हेर्नुभयो भने, तपाईं लगभग समग्र Hokkaido बुझ्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंको रुचिको क्षेत्र छ भने, तल सामग्रीहरूको तालिका हेर्नुहोस् र त्यो क्षेत्र हेर्नुहोस्। सामग्रीको तालिका होक्काइडोकेन्ट्रल होक्काइडो (डुओ) नर्थन होक्काइडो (डुहोकु) साउथेन होक्काइडो (डोआन) पूर्वी होक्काइडो (डोउटो) १: टोकरी पूर्वी होक्काइडो (डोउटो) आउटडोर आउटडोर आउटडोर चो, होक्काइडो = होक्काइडो पोइन्ट्सको एडोब स्टक नक्शा होक्काइडो, होन्शु, शिकोकु र क्युशु संग, चार प्रमुख टापु हो जुन जापानी टापु बनाउँछ। अन्य जापानी टापुहरू जस्तै, होक्काइडोमा ज्वालामुखीहरू छन्। त्यसैले त्यहाँ धेरै स्पा रिसोर्टहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडो जानुहुन्छ भने, म विशेष गरी दुई चीजहरू सिफारिस गर्दछु। पहिले, किन तपाईं होक्काइडोको अनुपम शहरहरूको भ्रमणको आनन्द लिनुहुन्न? जापानको प्रतिनिधित्व गर्ने सुन्दर शहरहरू जस्तै सप्पोरो, हाकोडाटे, ओटारु छन्। ती शहरहरू सुसि र रामेन जस्ता धेरै स्वादिष्ट खानाहरूका लागि पनि धेरै प्रख्यात छन्। दोस्रो, किन तपाईं होक्काइडोको अद्भुत प्रकृतिको आनन्द लिनुहुन्न? २० औं शताब्दीको पहिलो आधासम्म होक्काइडोको विकास हुन सकेन, यति धेरै जंगली प्रकृति बाँकी छ। त्यस पछि बनेको फूल क्षेत्रहरू र चराहरू ...
यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई माउन्ट हेर्न सबै भन्दा राम्रो दृष्टिकोण देखाउनेछु। फुजी माउन्ट फूजी जापानको सब भन्दा अग्लो पहाड हो जसको उचाई meters of3776 मिटर छ। त्यहाँ माउन्टको ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा बनाईएको तालहरू छन्। फुजी, र यसको वरिपरि एउटा सुन्दर परिदृश्य सिर्जना गर्दै। यदि तपाई धेरै माउन्ट हेर्न चाहानुहुन्छ। फुजी, म लगातार पाँचौं माउंट मा जान सिफारिस गर्ने छैन। फुजी किनकि तपाई माउन्ट देख्न सक्नुहुन्न। त्यहाँ फुजी। मलाई सबैभन्दा मनपर्दो दृश्य विन्दु एकदम शान्त तालको मोटोसु हो। ठिक छ, तपाई माउन्ट कहाँ हेर्न चाहानुहुन्छ? फुजी? >> तलको नक्शा छविमा क्लिक गर्नुहोस् छुट्टै पृष्ठमा नक्सा हेर्न << माउन्टको नक्शा। सामग्री सामग्रीको फुजी तालिकाअक्सेसफुजी-क्यू हाइलैंडअराकुरायामा सेन्जेन पार्क लेक कावागुचिकोगोटेम्बा प्रीमियम आउटलेट ओशिनो हक्काइलेक यामानाकोकोसाइको इयाशिनो-सातो नेन्बालेक मोटोसुकोभेन्यूसग्राइगामेन्जीआंगिराइगोइरागिजोइकोराइजीमागोजीको। माउन्टको फुजी 5th वें स्टेशनसम्मित। फुजी एक्सेस कावागुचिको स्टेशन, पर्यटकहरू यात्रा बस सेवा प्रयोग गरिरहेका छन्। यातायात दुबै रेल र बसका लागि धेरै सुविधाजनक छ = शटरस्टक बस माउन्टको वरपरको क्षेत्रबाट। फुजी धेरै विशाल छ, त्यहाँ टोकियोबाट जाँदा विभिन्न मार्गहरू छन्। सामान्यतया, तपाई सजिलैसँग विभिन्न बसहरू प्रयोग गरेर विभिन्न ठाउँहरूमा जान सक्नुहुन्छ। माउन्ट जाने बसको विवरणका लागि। Fuji, कृपया निम्न Fujikyuko बस साइट हेर्नुहोस्। टोकियोको शहर केन्द्रबाट माउन्ट वरपरका ठाउँहरू। फुजी, यो बस मार्फत २ घण्टा लाग्छ। जब तपाईं माउन्ट टुरिस्ट आकर्षणको वरिपरि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ। फुजी, तपाईंले बस प्रयोग गर्नु पर्छ। Fujikyuko बस मुख्य पर्यटक को चारै तिर यात्रा राउन्डबाउट बसहरु ड्राइभ गर्दैछ ...
क्योटो एक सुन्दर शहर हो जुन परम्परागत जापानी संस्कृतिको उत्तराधिकारी हो। यदि तपाईं क्योटोमा जानुहुन्छ भने, तपाईं जापानी परम्परागत संस्कृति तपाईंको मनको सामग्रीमा मजा लिन सक्नुहुनेछ। यस पृष्ठमा, म पर्यटकीय आकर्षणहरूको परिचय दिनेछु जुन क्योटोमा विशेष गरी सिफारिस गरिएको छ। यो पृष्ठ लामो छ, तर यदि तपाईं अन्तमा यो पृष्ठ पढ्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई क्योटोमा अवलोकन गर्नका लागि आवश्यक आधारभूत जानकारी प्राप्त हुनेछ। मैले लिंकहरू पनि जोडेँ जस्तै प्रत्येक वेबसाइटका लागि आधिकारिक वेबसाइट, कृपया यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। >> यदि तपाईंले तलको भिडियो क्लिक गर्नुभयो भने, तपाईंले क्योटो राती पनि सुन्दर देख्नुहुनेछ << सामग्रीको तालिका क्योटो फोटोसफुशिमी इनारी ताइशा श्रीनसँजानजेन्डोकिओमिज़ुडेरा मन्दिरकिन्काकुजी मन्दिर = गोल्डेन पाभेलियन जिन्काकुजी मन्दिर = रजत पवेलियनकाजीजी मंदिरकोचिजानिजानिजिजिज रिवरपोन्टो जिल्ला निशिकी मार्केटकोडाईजी मंदिर तोफुकुजी मंदिरतोजी मंदिरब्योदोन मंदिरदैतकुजी मंदिर र्योन्जी मंदिर क्यायोटो इम्पीरियल पैलेस (क्योटो गोशो) निजो क्याट्सल कत्सुरा रिक्यु अरश्यामाटोइ क्योटो स्टूडियो पार्क किफ्यून श्राइन आउट क्युटोको क्योटो सुन्दर ब्रोमको क्युटोको सुन्दर शहर हो। यो लगभग २ घण्टा १ 368 मिनेट टोक्यो बाट छिटो Shinkansen द्वारा छ। क्योटो लगभग १2०० बर्षको लागि जापानको राजधानी थियो जबसम्म राजधानी १ Tok in Tok मा टोकियोमा सरेन। जापानको अनौठो संस्कृति यस शहरमा निर्माण गरिएको छ। आज पनि क्योटोमा धेरै मन्दिर र मन्दिरहरू छन्। यहाँ परम्परागत काठका घरहरू पनि छन् "क्यो-माचिया" यहाँ र त्यहाँ। यदि तपाईं Gion आदि जानुहुन्छ, तपाईं सुन्दर ढंगले लुगा लगाएका महिलाहरू, मैको र Geiko देख्नुहुनेछ। जब तपाईं क्योटोमा मन्दिर र मन्दिरहरूको भ्रमण गर्नुहुन्छ, तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ कि रूखहरू र ...
"ओसाका टोकियो भन्दा बढी रमाइलो शहर हो।" ओसाकाको लोकप्रियता हालै विदेशबाट आएका पर्यटकहरूको बीचमा बढेको छ। ओसाका पश्चिमी जापानको मध्य शहर हो। ओसाका वाणिज्य द्वारा विकसित गरिएको छ, जबकि टोकियो समुराई द्वारा निर्मित शहर हो। त्यसो भए, ओसाकाको लोकप्रिय वातावरण छ। ओसाकाको डाउनटाउन क्षेत्र आकर्षक छ। सडक खाना सस्तो र स्वादिष्ट हुन्छ। यस पृष्ठमा, म त्यस्ता रमाईलो ओसाकाको बारेमा परिचय दिनेछु। http://japan77.net/wp-content/uploads/2018/06/Dotonbori-Osaka-Japan-Shutterstock.mp4 सामग्रीको तालिका ओसाका मिनामीको ओटलाइन: डोटनबोरी, नाम्बा, शिन्साबाशीअबेनोसिन्सेकाइमेडाओसाका कास्टलउन्जाइन्स्वाउरिस्क युनिवर्सिline्ग युनिवर्सिlineबाउसोरबाउन्सोरबाइन ओसाका डोटनबोरी वाकि Street स्ट्रीट, ओसाका, जापान = शटरस्टक अलग पृष्ठमा गुगल नक्सा हेर्न तलको नक्शा छविमा क्लिक गर्नुहोस्। कृपया यहाँ JR ट्रेन, निजी रेलवे र सबवेको मार्ग नक्शाको लागि हेर्नुहोस्। ओसाकाको नक्शा ओसाका, मिनामी (अर्थ जापानीमा दक्षिण) र किटा (जसको अर्थ उत्तर) मा दुई शहर शहरहरू छन्। मिनामीको केन्द्रमा, डोटनबोरी र नाम्बा जस्ता प्रख्यात जिल्लाहरू छन्। यहाँ, फ्ल्यास नियोनले टुरिस्टको ध्यान एकत्रित गर्दछ, माथिको तस्विरमा देखिएझैं। यस क्षेत्र मा, तपाईं Takoyaki रूपमा स्वादिष्ट सडक खाना को एक धेरै आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं ओसाका जानुहुन्छ भने, म डाटनबरी र नाम्बा वरिपरि घुम्न सिफारिस गर्दछु। किताको मुटुमा उम्मेद भनिने जिल्ला छ। उम्मेद डोटनबोरी र नाम्बा भन्दा थोरै सुन्दर हुन सक्छ। उम्मेदको वातावरण टोकियोसँग मिल्दोजुल्दो छ। यस क्षेत्रमा धेरै गगनचुम्बी भवनहरू छन्। यी दुई शहर क्षेत्रहरू बाहेक, हालसालै, खाडी क्षेत्रमा अवस्थित युनिभर्सल स्टुडियो जापान (USJ) भएको छ ...
यदि तपाईं जापानको सुन्दर समुद्रीतट दृश्यको आनन्द लिन चाहानुहुन्छ भने उत्तम सिफारिश गरिएको क्षेत्र ओकिनावा हो। ओकिनावा क्युशुको दक्षिणमा अवस्थित छन्। यसले उत्तर-दक्षिण km०० किमी र पश्चिमदेखि १,००० किलोमिटरको विशाल पानीमा विविध टापुहरू समावेश गर्दछ। त्यहाँ कोरल रीफहरू, क्रिस्टल स्पष्ट निलो महासागर, सेतो बालुवा समुद्र तट, र सुन्दर प्राकृतिक दृश्यहरू छन्। अद्वितीय Ryukyu संस्कृति पनि आकर्षक छ। यस पृष्ठमा, म ओकिनावामा सबैभन्दा सिफारिश गरिएका पर्यटन स्थलहरूको परिचय दिनेछु। विषयवस्तु ओकिनावा ओकिनावा मुख्य द्वीपमियाकोजीमा टापु इशिगाकीजीमा टापु कास्टनेटको साथ ओकिनावा परम्परागत नृत्यको रूपरेखा ओकिनावा सारांश ओकिनावा प्रान्तमा ओकिनावा मुख्य टापु वरपर ओकिनावा टापु, मिआकोजी टापु वरपर मिकाको टापु, चारै तिर विभाजित छ। याइयामा टापुहरू ईशिगाकिजीमा टापुको वरिपरि छन्। त्यसोभए, ओकिनावामा यात्रा गर्दा, तपाईंले आफ्नो यात्रा निर्णय गर्नुपर्नेछ, चाहे तपाईं ओकिनावा मुख्य टापुमा बस्नुहुनेछ, दुबै ओकिनावा मुख्य टापु र अर्को दुर्गम टापुको आनन्द लिनुहोस्, वा टाढाको टापुमा बस्नुहुनेछ। ओकिनावाको कुल जनसंख्या करीव १.400 मिलियन मानिस छन्, जस मध्ये करीव% ०% ओकिनावा मुख्य टापुमा बस्छन्। ओकिनावा मुख्य टापु करिब 1,000 1.45० किलोमिटर वरपर रहेको छ र लामो समयदेखि दक्षिणमा मुख्य रूपले विकसित भएको छ। प्रिफेक्चुरल राजधानी यस द्वीपको दक्षिण, नाहा शहरमा अवस्थित छ। यस टापुको उत्तरी भागमा, तपाईं जंगली प्रकृति पाउनुहुनेछ। त्यसोभए, यदि तपाईं ओकिनावा मुख्य टापुमा बस्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो यात्रा पक्का निर्णय गर्नुपर्नेछ, दक्षिणमा बस्न वा उत्तरीमा रिसोर्टमा बस्नु ...
निम्नलिखित क्षेत्र द्वारा लेख सम्बन्धित छन्।
सिफारिस गरिएका गन्तव्यहरू
यस पृष्ठमा, म सिफारिश गरिएको टूरिस्ट स्पटहरू र के गर्ने जब तपाईं होक्काइडोको सप्पोरोमा यात्रा गर्नुहुन्छ। म बर्षमा सिफारिस गर्ने पर्यटक स्थलहरु बाहेक, म सिफारिस गरिएका स्पटहरु र वसन्त, ग्रीष्म, शरद winterतु र जाडोको प्रत्येक मौसममा के गर्ने भनेर बुझाउनेछु। सामग्रीको तालिकासप्पोरोमा गर्नु पर्ने सब भन्दा राम्रो चीजहरू जाडोमा सप्पोरोमा गर्नु पर्ने सब भन्दा राम्रो चीजहरू स्प्रिंग बेस्टमा सप्पोरोमा गर्नुपर्ने काम गर्ने ग्रीष्मकालीन बेस्ट चीजहरू सप्पोरोमा गर्ने शरद inतुमा सर्परो हिउँदको रेखाचित्र दृश्य हिउँको सपनाको पर्वतबाट दृश्य। साँझ = शटरस्टक जेआर सप्पोरो स्टेशनमा। त्यहाँ एक लग्जरी होटेल "जेआर टावर होटेल निक्को सप्पोरो" सप्पोरोमा सब भन्दा राम्रो मध्ये एक स्टेशनको माथि छ। होटेल अतिथिहरूले प्राकृतिक तातो स्प्रि .हरूको पनि मजा लिन सक्छन् सप्पोरो जापानको 5th वटा ठुलो शहर र होक्काइडोको उत्तरी टापुको राजधानी हो। दुई सय भन्दा कम बर्षमा, सप्पोरोले केवल सात व्यक्तिको बसोबासबाट एउटा सम्पन्न महानगरमा द्रुत बृद्धि भएको छ। उत्तरी जापानका आदिवासीहरु ऐनुको भाषामा सप्पोरो शब्दको अर्थ समतलबाट बग्ने अत्यावश्यक नदी हो। आज साप्पोरो यसको खोला भन्दा धेरैको लागि चिनिन्छ। एक हिउँ चाड वार्षिक रूपमा आयोजित गरिन्छ, र सप्पोरो पनि यसको ramen र बियर को लागी प्रसिद्ध छ। ट्रेन द्वारा सप्पोरोको यात्रा पूर्ण रूपमा जापान रेल पास द्वारा कभर गरिएको छ। उत्तर अमेरिका शैलीमा आधारित साप्पोरो यसको आयताकार सडक प्रणालीमा विशिष्ट छ। यस प्रणालीले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ ...
निसेको जापानको प्रतिनिधि रिसोर्ट हो। यो विश्वव्यापी रूपमा परिचित छ, खास गरी जाडोको खेलको लागि एक पवित्र ठाउँको रूपमा। निसेकोमा, तपाईं स्किइ enjoyको मजा लिन सक्नुहुनेछ नोभेम्बरको पछिल्लोदेखि मेको सुरूवातको लागि। माउन्टसँग मिल्दोजुल्दो सुन्दर पहाड छ। निसेकोमा फुजी। यो माथिको चित्रमा देखीएको "माउंट योटेइ" हो। यस पहाडलाई नदी पार गर्नका लागि अर्को पर्वत पनि छ। यो "निसेको अन्नुपुरी" तलको चित्रमा देखिएको छ। निसेको अन्नुपुरीको टेपमा, चार ठूला स्की रिसोर्टहरू विकसित भए। यी स्की रिसोर्टहरूले अद्भुत हिउँको गुणस्तरको साथ घरेलु र विदेशी स्कीयरहरू र स्नोबोर्डरहरू आकर्षित गर्दैछन्। थप रूपमा, निसेकोसँग अद्भुत तातो स्प्रि .हरू छन्। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई परिचय दिन चाहन्छु कि तपाईंले निसेकोमा के गर्नुपर्छ। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई वसन्त, गर्मी, शरद asतु र हिउँदमा निसेको बारेमा निसेकोको बारेमा बताउनेछु। निसेकोमा जाडो धेरै लामो हुन्छ, र वसन्त, ग्रीष्म autतु, शरद fastतु चाँडो चल्ने जस्तो देखिन्छ। यद्यपि तपाईं यी मौसमहरूमा गतिविधिहरूको धेरै आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। म यस लेखको दोस्रो भागमा निसेको वसन्त, गर्मी, शरद introduceतु प्रस्तुत गर्दछु। यदि तपाईं यी मौसमहरूको बारेमा बढि जान्न चाहानुहुन्छ भने, कृपया तल सामग्रीको तालिका हेर्नुहोस् र तपाईंको ख्याल गर्ने आईटममा क्लिक गर्नुहोस्। विषयसूची major प्रमुख कारणहरू किन निसेकोलाई विश्वव्यापी रूपमा माया गरिन्छ? निसेकोमा sk स्की रिसोर्ट्सको मजा लिनुहोस्! वसन्त, गर्मी, शरद 4तुमा गर्ने उत्तम चीजहरू नेसेकोमा शरद leavesतुको पातहरूको आनन्द लिनका लागि! निसेकोलाई विश्वव्यापी रूपमा किन माया गरिन्छ भन्ने major प्रमुख कारणहरू, निसेको अन्नुपुरी भनिने पहाड रहेको छ, माउंटको अनुहार। Yotei माथिको। ...
होक्काइडोमा हाकोडाटे धेरै सुन्दर बन्दरगाह शहर हो र यो पर्यटकहरूमा लोकप्रिय छ। मलाई पनि यो मन पर्छ र प्रायः जान्छु। हाकोडेट स्टेशनको वरपर बिहानी बजारमा, तपाईं रमाईलो र रमाईलो समय लिन सक्नुहुनेछ। हाकोडाटेयामाबाट रातको दृश्य पनि उत्तम हो। यस पृष्ठमा, म हाकोडेट परिचय दिनेछु। सामग्रीको तालिका राम्रो चीजहरू हाकोडाटेमा गर्नु किन तपाई ओनुमा पार्क वा मत्सुमा जानुहुन्न? हाकोडाटेमा गर्नु पर्ने उत्तम चीज हकोडाट होक्काइडोको दक्षिणी छेउमा अवस्थित शहर हो। यो सप्पोरो र Asahikawa पछि होक्काइडो मा तेस्रो शहर हो। धेरै संख्यामा पर्यटकहरू प्रत्येक वर्ष यस शहरको भ्रमण गर्छन्। किनकि हकोडेटसँग धेरै आकर्षक दर्शनीय ठाउँहरू छन्। आउनुहोस् हामी कस्तो प्रकारको दृष्य हेर्ने ठाउँहरू कंक्रीटमा छन्। प्रत्येक शीर्षकमा क्लिक गर्नुहोस् उनीहरूको आधिकारिक वेबसाइट प्रदर्शन गर्न! हाकोडाटेमा माउन्ट हकोडेट माथी पुग्न cable मिनेटमा केबल कार, हाकोडाटे, होक्काइडो द्वारा पुग्न सकिन्छ यो माउन्ट हुन सक्छ। हाकोडाटे कि हाकोडाटे भ्रमण गर्ने पर्यटकहरू पहिले जान्छन्। हाकोडाटे यसको सुन्दर रात दृश्यका लागि प्रसिद्ध छ। समुद्रले घेरिएको, शहरको बत्तीहरू चम्कन्छ। माउन्ट हाकोडेट स्थान हो जहाँ तपाईं यो रातको दृश्य धेरै सुन्दरताका साथ देख्न सक्नुहुनेछ। माउन्ट हाकोडाटे एउटा सानो पहाड हो जुन लगभग3334 मीटरको उचाईको साथ छ। यो पहाड ज्वालामुखी गतिविधिबाट जन्मिएको थियो। सुरुमा यो पहाड टापु थियो। यद्यपि यस टापुबाट पृथ्वी र बालुवाका कारणले हाकोडाटेको वर्तमान क्षेत्रको जन्म भएको थियो। माउन्टको शीर्षमा Hakodate त्यहाँ एक ठूलो अवलोकन प्लेटफर्म छ ...
जापानको तोहोकु क्षेत्रमा जाडोमा चिसो बढी हुन्छ, हिउँ अक्सर पर्दछ। व्यक्तिहरूले यस वातावरणमा बाँच्न धैर्यपूर्वक विभिन्न तरिकाहरू बनाएका छन्। यदि तपाईं तोहोकु क्षेत्रमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले तोहोकु क्षेत्रमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको जीवन महसुस गर्नुहुनेछ। तोहोकु क्षेत्रमा दृश्यहरू ...
सेंडाई (मियागी प्रान्त)
Towada, Oirase (Aomori प्रान्त)
आइजुवाकमात्सु (फुकुशिमा प्रान्त)
अओमोरी प्रान्त जापानको होन्शुको उत्तरी भागमा अवस्थित छ। यो क्षेत्र धेरै चिसो छ र प्रशान्त साइड बाहेक बर्फ हिउँ धनी छ। अझै, अओमोरीले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्दछ। त्यो किनभने त्यहाँ धेरै पर्यटन आकर्षणहरू छन् जस्तै हिरोसाकी कासल र ओइरासे स्ट्रिम, जुन जापानका प्रतिनिधि हुन्। अगस्टमा आयोजित नेबुटा महोत्सव पनि अचम्मको छ! सामग्रीको तालिका अओमोरी हिरोसाकी केसल ओरासे स्ट्रीम / ताल टोवाडा हक्कोडा माउन्टेन नेबुटा फेस्टिवल लोकल विशेषताहरू गोमोगावारा स्टेशन, अमोरी, तोहोकु, जापानको शटरस्टकमा नक्शा ओरेक्चरको नक्शामा हिउँदको मध्य हिउँदमा सुगरु रेलमार्गको हिउँले ढाकिएको ट्र्याकमा बर्फ ढाकिएको रेलको रूपरेखा। पूर्वमा, पश्चिममा जापान सागर र उत्तरमा त्सुगारु जलसञ्चार मुख्य शहरहरू अओमोरी शहर, हीरोसाकी शहर, हचिनोहे शहर हो। यदि तपाईं टोकियो वा ओसाकाबाट अओमोरीमा जानुहुन्छ भने यो हवाईजहाजको प्रयोग गर्न उपयुक्त हुन्छ। अओमोरी प्रान्तमा एओमोरी एयरपोर्ट र मिसवा एयरपोर्ट छ। थप रूपमा, तपाई टोहोकु शिन्कानसेन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अओमोरी प्रान्तमा शिन अओमोरी स्टेशन, शिचिनो-टोवाडा स्टेशन, हचिनोहे स्टेशन छन्। अओमोरी प्रिफेक्चर पूरै क्षेत्रभरि भारी हिउँको क्षेत्रको रूपमा तोकिएको छ, जसमध्ये केही विशेष भारी हिउँ पर्ने क्षेत्रहरूको रूपमा तोकिएको छ। एक विशाल हिमाली क्षेत्र यस क्षेत्रमा फैलिन्छ। विशेष गरी हिमालहरूमा यो जाडोमा कठोर छ। त्यहाँ जाडोमा धेरै खतरनाक ठाउँहरू छन्, त्यसैले कृपया आफैंलाई नहाल्नुहोस्। हिरोसाकी महल सेतो हिरोसाकी कासल र यसको रातो काठको पुल मध्य हिउँदको मौसम, अओमोरी, तोहोकु, जापान = शटरस्टक किनकि अओमोरी प्रान्त साँच्चै नै हो ...
१ 13 औं शताब्दीको अन्तमा, इटालियन व्यापारी मार्को पोलोले युरोपका मानिसहरूलाई सुदूर पूर्वमा सुनौलो देश भएको कुरा बताए। वास्तवमा त्यतिबेला सुन जापानमा उत्पादन भइरहेको थियो। मार्को पोलोले कसैबाट सुनेको जस्तो देखिन्छ कि इवाटे प्रान्तको हीराइजुमी धेरै धनी शहर हो। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई इवाटे प्रान्तमा परिचय गराउनेछु, जुन कहिलेकाँही यूरोपीयन मानिसहरूलाई पनि चिनिन्थ्यो। IwateHiraizumi को विषयवस्तुको रूपरेखा: Chusonji मंदिर कोइवाई फार्म Wankosoba नूडल्स स्थानीय विशेषताहरू Iwate Tono Furusato गाउँको रूपरेखा जहाँ टोनो, Iwate प्रान्त, जापान = Iwate Iwate Prefecture क्षेत्र को नक्शा शाटरस्टक नक्शा छ। यो अओमोरी प्रान्तको दक्षिणमा छ। र यो होक्काइडो पछि दोस्रो सबैभन्दा ठूलो प्रान्त हो। इवाटे प्रान्तको जनसंख्या करीव १,२1,250,000०,००० मानिस छन्, जसमध्ये 70०% भन्दा बढी मोरियोका शहरमा केन्द्रित किताकामी बेसिनमा केन्द्रित छन्। अर्को शब्दमा, थोरै मानिसहरु अन्य विशाल क्षेत्रमा बस्ने। यदि तपाईं वास्तवमै कारद्वारा आइवेट प्रान्तमा ड्राईभ गर्नुहुन्छ भने, तपाईं आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ कि भव्य दृश्यहरू होक्काइडो जस्ता पछ्याउँनेछन्। यो यस्तो बसोबास गरिएको क्षेत्र हो, तर विगतमा एक समय यो ठाउँ हिराइजुमीको वरपर उन्नति भएको थियो। युरोपमा सरेको हिराइजुमीको समृद्धि पत्ता लगाउन तपाई किन यात्रामा जानुहुन्न? पहुँच त्यहाँ Iwate प्रान्त को Kitakami बेसिन मा Hanamori एयरपोर्ट छ। यो विमानस्थलबाट मोरियोकासम्म बसबाट झन्डै minutes 45 मिनेटमा छ जुन प्रान्त कार्यालयको स्थान हो। तोहोकुको stations स्टेशनहरू छन् ...
अकिता प्रान्तमा त्यहाँ धेरै "पुरानो जापानी" छन्! उदाहरणको लागि, ओगा प्रायद्वीपको ग्रामीण गाउँहरूमा, पुरुषहरू नामहागे भनिने राक्षसहरूको पोशाकमा वार्षिक कार्यक्रमहरू अहंकारी बच्चाहरूलाई अझै पनि वंशानुगत रूपमा डराउँछन्। काकुनुदानमा एउटा अद्भुत समुराई निवास छोडियो। किन तपाईं अकिताको देश छेउमा पुरानो जापानको आनन्द लिनुहुन्न? सामग्रीको तालिका अकिता ओगा प्रायद्वीप र "Namahage" काकुनोडाटे र समुराई गाउँ न्यूयू ओन्सेन फेस्टाइल्सअकिता डग रूपरेखा अकिता चामल क्षेत्रको अकिता, जापानको ग्रामीण टाउनशिपको बाह्यरेखा। जापान विश्वमा चामलको नवौं ठूलो उत्पादक हो = शटरस्टक अकिता अकिता प्रान्तको नक्शा जापानको छेउमा तोहोकु क्षेत्रको उत्तरी भागमा अवस्थित छ। जनसंख्या करीव 980,000 XNUMX०,००० मानिस छन्। यस क्षेत्रमा धान उत्पादन फस्टाइरहेको छ र विशाल धान क्षेत्र फैलिन्छ। यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने "अकिताकोमाची" नामको चामल धेरै स्वादिष्ट हुन्छ। अकिता प्रान्तको पूर्वी भागमा, ओउ पर्वतहरू उत्तरदेखि दक्षिणमा पर्दछन्। अकिता मैदान र नुशिरो मैदान जस्ता मैदानहरू बाहेक, त्यहाँ ओडेट बेसिन र योकोटे बेसिन जस्ता बेसिनहरू छन्। मौसम र अकिता प्रान्तमा मौसम अकिता प्रान्त जापानको सागरमा रहेको तोहोकु क्षेत्रको उत्तरी भागमा अवस्थित छ। जाडोमा, चिसो हावा जापानको सागरबाट आउँदछ, अन्तर्देशीय पहाड श्रृंखला र हिउँमा हिर्काउँदछ। जाडोमा, बादल दिन जारी रहन्छ। त्यहाँ भित्री क्षेत्रमा धेरै भारी हिउँ पर्ने क्षेत्रहरू छन्। गर्मीमा, "फर्न घटना" जुन अपेक्षाकृत तातो हावा अन्तर्देशीय पहाडबाट आउँछ ...
यदि तपाइँ पहिलो पटक जापानको तोहोकु क्षेत्रमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, मलाई लाग्छ कि मियागी प्रान्तमा पहिले जानु राम्रो उपाय हो। मियागी प्रान्तमा सेन्दै शहर छ, तोहोकुको सबैभन्दा ठूलो शहर। तपाईं यस सुन्दर शहरको तोहोकुभरि नै स्वादिष्ट खानाको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। मत्सुशिमा खाडी सेन्डाई शहरको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा फैलिएको यसको प्राकृतिक सौन्दर्यको लागि प्रसिद्ध छ। तपाईले विश्व भर यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ जुन माथिको जहाजमा देखाइएको छ। सान्रिकु भन्ने क्षेत्र यस क्षेत्रलाई मार्च ११, २०११ मा भएको ग्रेट इस्ट जापान भूकम्पले ठूलो असर पारेको थियो। अझै पनि मानिसहरूले समुद्रलाई माया गर्छन् जसले उनीहरूलाई ठूलो आशिष् दिन्छ र समुद्रसँगै बस्दछ। सामग्री तालिका मिआगीसेन्डामात्सुशिमा रूपरेखाको शिमोट्सू बे मिनामी सान्रिकु-चो = शटरस्टक म्यापिको मियागी मियागी प्रान्तको नक्शा तोहोकु क्षेत्रको प्रशान्त क्षेत्रमा अवस्थित छ, र यसको पश्चिमी भाग ओउ पर्वत पर्वतमालाको सम्पर्कमा छ। यो टोकियोबाट करीव 11 2011० किलोमिटर उत्तरमा रहेको छ। मियागी प्रान्तको लगभग २. 350. मिलियन जनसंख्या छ र यो धेरै पहिलेदेखि तोहोकु क्षेत्रको केन्द्र भएको छ। केन्द्र सेन्दै शहर हो। मियागी प्रान्तका करीव आधा मानिसहरू यस शहरमा बस्छन्। मियागी प्रान्तमा प्रशान्त महासागरमा, गहिरो इन्डेन्टेड समुद्री तट। यो क्षेत्र ठूलो सुनामीबाट प्रभावित भएको छ जब धेरै पहिले ठूलो भूकम्प आयो। यद्यपि त्यहाँ गहिरो खाडीमा थुप्रै माछा र शेलहरू छन् जसले हामीलाई धनी आशिष्‌ दिन्छ। मौसम र मियागी प्रान्त मात्सुशिमा खाडी जाडोमा,
यस पृष्ठमा, म जापानको तोहोकु क्षेत्रको दक्षिणपश्चिमी भागमा अवस्थित यामगाता प्रान्तको परिचय दिनेछु। यहाँ धेरै पर्वतहरू छन्। र जाडोमा, धेरै हिउँ पर्दछ। माथिल्लो तस्विर माटो हो। जाओको जाडो परिदृश्य। कृपया हेर्नुहोस्! रूखहरू हिउँमा बेर्छन् र हिउँ राक्षसहरूमा परिणत हुन्छन्! यमगाताजाओ यमदेरा (रिशाकुजी मन्दिर) जिन्जान ओन्सेन मोगामी नदीको रूपरेखा र हिम मोन्स्टर, यामागाता, जापान = शटरस्टॉक_१11784053381१ यमगाता यामगाता प्रान्तको नक्शा दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र जापानको क्षेत्र हो। पश्चिममा यस प्रान्तको कुल क्षेत्र को About 85% हिमाली क्षेत्र हो। पहाडबाट बग्ने पानी मोगामी नदीमा भेला भयो र जापानको समुद्रमा खन्याइयो। यामगाता प्रान्तका धेरै व्यक्तिहरू यस खोलामा बस्छन्। यामगाता प्रान्तमा धेरै हिउँ छन्। यदि तपाईं जाडोमा यामगाता प्रान्तमा जानुहुन्छ भने, तपाईं एक अद्भुत हिउँको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। उही समयमा, तपाईले स्कूपहरू आदि लिएर छानामा हिउँ फ्याँक्न संघर्ष गरिरहेका व्यक्तिहरू पनि देख्नुहुनेछ। एयरपोर्ट यामागाता प्रान्तमा पहाडहरू धेरै क्षेत्रहरूमा विभाजित छन्। ती मध्ये, यदि तपाईं यामगाता शहरमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, तपाईं विमानबाट यमगाता एयरपोर्ट जानुहुन्छ। यो यमगाता एयरपोर्टबाट JR Yamagata स्टेशन सम्मको बसबाट करीव minutes 35 मिनेट लाग्छ। यामागाटा एयरपोर्टमा, निर्धारित एयरपोर्टहरू निम्न एयरपोर्टहरूसँग सञ्चालन भइरहेको छ। शिन Chitose (सापोरो) Haneda (टोक्यो) Komaki (नागोया) Itami (ओसाका) यदि तपाईं जानुहोस् ...
यदि जापानी मानिसहरु एक शब्द मा फुकुशिमा प्रान्त को अभिव्यक्त गर्छन्, धेरै व्यक्तिले "धैर्य" शब्दको नाम राख्नेछन्। फुकुशिमा प्रान्तका व्यक्तिहरूले धेरै समस्याहरू अनुभव गरिसकेका छन् र उनीहरूलाई परास्त गरेका छन्। हालसालै, ग्रेट ईस्ट जापान भूकम्प (२०११) सँगै परमाणु उर्जा संयंत्र दुर्घटनाका कारण अन्धकार छवि संसारमा फैलियो। अहिले फुकुशिमा क्षेत्रका व्यक्तिहरूले यस कठिनाईलाई पन्छाउन कडा प्रयत्न गरिरहेका छन्। यस पृष्ठमा, म यो प्रान्तमा त्यस्तो पृष्ठभूमिमा आधारित सिफारिश दर्शनीय स्थलहरू परिचय गर्ने छु। सामग्रीको तालिका फुकुशिमासुरुगा कासल ओचीजुकु गाउँको रूपरेखा JR ताडामी लाइनस्पा रिसोर्ट्स वायुयानको फुकुशिमा फुकुशिमा शहर दृश्य दृश्य हनुमियामा पार्कबाट, फुकुशिमा, तोहोकु क्षेत्र, जापान। पार्क निकै प्रख्यात सकुरा दृश्य स्थल = शटरस्टक नक्शा फुकुशिमा इतिहास र वर्तमान स्थिति फुकुशिमा फुकुशिमा प्रान्तको तोहोकु क्षेत्रको दक्षिणी भागमा रहेको छ, र पूर्वमा प्रशान्त महासागरको अनुहार छ। यो प्रान्तको जनसंख्या र आर्थिक शक्ति तोहोकु जिल्लाको मियागी प्रान्त पछि दोस्रो छ। टोकुगावा शोगुनेटको युगमा, टोकुगावा शोगुनेटलाई समर्थन गर्न यस प्रान्तमा आइज वंश थियो। आइजु वंशको समुराई राम्ररी तालिम पाएको र धेरै साहसी थिए। आइजु वंशले नयाँ सरकारी सेनाको बिरूद्ध अन्तमा लडाई जारी राख्यो। नतिजा स्वरूप, आइजु वंशका धेरै समुराई युद्धमा मारिए। २०११ मा यस क्षेत्रको तटमा रहेको आणविक शक्ति केन्द्रलाई ग्रेट इस्ट जापान भूकम्पसँग सम्बन्धित सुनामीले ध्वस्त पारेको थियो र विकिरण संदूषण दुर्घटना भयो। यस समयमा, आणविक वरपरका बासिन्दाहरू ...
यदि तपाईं जापानको टोकियो जानुहुन्छ भने, किन टोकियो वरपर छोटो यात्राको मजा लिनुहुन्न? टोकियो मा केन्द्रित Kanto मैदान (Kanto क्षेत्र) मा धेरै आकर्षक दर्शनीय स्थलहरु छन्। ती क्षेत्रहरूमा तपाईं टोकियो शहरको केन्द्र भन्दा भिन्न विविध संसारको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहन्छु कि ...
कामकुरा (कानगावा प्रान्त)
टोकियोको उपनगरहरुमा, MT छ। माथिको तस्वीरमा देखिए जस्तै टाकाओ। यस पहाडले मिचेलिन गाइडका साथ तीन तारा जितेको छ। तपाईं सजीलै शिखरमा केबल कार द्वारा जान सक्नुहुन्छ। त्यहाँ एक रहस्यमय मन्दिर र सुन्दर प्रकृति छ। टोकियो मेट्रोपोलिटनशो किनेन पार्कमेटको सामग्रीहरूको आउटलाइन। टोकियो मेट्रोपोलिटनको टोक्यो शोआ किनेन पार्क माटोको रूपरेखा। टाकाओ म अन्तमा पढेर तपाईंको कदर गर्छु। मेरो बारेमा बान कुरोसवा "Kanto क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ" फिर्ता मा फिर्ता म लामो Nihon Keizai Shimbun (NIKKEI) को लागी एक वरिष्ठ सम्पादक को रूप मा काम गरीरहेको छु र वर्तमान मा एक स्वतन्त्र वेब लेखक को रूप मा काम। NIKKEI मा, म जापानी संस्कृति मा मिडिया को प्रमुख संपादक थियो। मलाई जापानको बारेमा धेरै रमाईलो र चाखलाग्दो चीजहरू दिनुहोस्। अधिक विवरणको लागि कृपया यस लेखलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्। सम्बन्धित पोष्टहरू: फोटोहरू: माउन्ट। टाकाओ- मिशेलिन--तारे पर्यटन गन्तव्य Japanese जापानी खाना तपाईंको लागि सिफारिश गरियो! सुशी, काइसेकी, ओकोनोमियाकी ... Best उत्तम शपिंग स्थानहरू र जापानमा Recommend सिफारिश गरिएको ब्रान्ड जापानी ओन्सेन विशेष रूपमा विदेशी पर्यटक समुराई र निन्जा अनुभवका लागि सिफारिश गरिएको छ! जापानका Best उत्तम सिफारिश गरिएका ठाउँहरू जापानको तपाईंको यात्राको लागि तयारी गर्दा सिफारिश गरिएका उपयोगी साइटहरू जापानमा होटल बुकिंगका लागि सिफारिश गरिएका साइटहरू सिफारिश गरिएको जापानी स्थानीय साइट! मध्य जापान (Chubu) सिफारिश साइटहरू! जापानी रेस्टुरेन्ट र उत्सव "तपाईंको नाम"!3यस प्रेम कहानी को सिफारिश मोडेल स्थानहरु! जापानको सबैभन्दा सिफारिश गरिएको चाडहरू जाडो, वसन्त, गर्मी, शरद Recommendतुमा सिफारिश गरिएको स्थानीय साइट! पूर्वी जापान (होक्काइडो, तोहोकु, कन्तो)
कानागावा प्रान्त टोक्योको दक्षिणमा अवस्थित छ। यो प्रान्तमा योकोहामा, कामकुरा, एनोशिमा र हाकोण जस्ता धेरै लोकप्रिय पर्यटन स्थलहरू छन्। कानागावा योकोहामा कामाकुरा हकोने को रूपरेखा कनागावा माउन्ट, फुजी, र, एनोशिमा, शोनान, कनागावा, जापान = शटरस्टक लेक आशी र माउन्ट फुजी पृष्ठभूमि, हाकोने, कानागावा प्रान्त, जापानको नक्सा कानागावा योकोहामा कामकुरा पढ्नको लागि तपाईले कदर गर्नुभयो । मेरो बारेमा बान कुरोसवा "Kanto क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ" फिर्ता मा फिर्ता म लामो Nihon Keizai Shimbun (NIKKEI) को लागी एक वरिष्ठ सम्पादक को रूप मा काम गरीरहेको छु र वर्तमान मा एक स्वतन्त्र वेब लेखक को रूप मा काम। NIKKEI मा, म जापानी संस्कृति मा मिडिया को प्रमुख संपादक थियो। मलाई जापानको बारेमा धेरै रमाईलो र चाखलाग्दो चीजहरू दिनुहोस्। अधिक विवरणको लागि कृपया यस लेखलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्। सम्बन्धित पोष्टहरू: फोटोहरू: कानागावा प्रान्तमा हाकोन तीर्थका फोटोहरू: कानागावा प्रान्तमा कामकुरा -डायबुट्सु, एनोडेन आदि। फोटो: हाकोन -टोकियो नजिकैको तातो वसन्त क्षेत्र फोटोहरू: योकोहामा फोटोहरू: शोनन -टोक्योबाट एक दिनको यात्राको लागि सिफारिश गरियो फोटो: हिउँ टोक्यो (कन्टो क्षेत्र) वरपर अकिता प्रान्तमा डोम "कामकुरा"! Pre प्रान्तहरूमा गर्नलाई उत्तम चीजहरू सिफारिश गरिएको स्थानीय साइट! पूर्वी जापान (होक्काइडो, तोहोकु, कन्तो) शिजुओका प्रान्त: माई प्रान्तमा गर्नुपर्ने उत्तम आकर्षण र कुराहरु: सर्वश्रेष्ठ आकर्षण र गर्नु पर्ने कुराहरु फोटोहरू: माई प्रिफेक्चर फोटोहरूमा आइस जिingu्गु श्राइन: जापानमा वर्षाका दिनहरू - रेने मौसम June जुन, सेप्टेम्बर र मार्च हो।
सैतामा प्रान्त टोकियोको पूर्वमा अवस्थित छ। यस प्रान्तमा नरिता एयरपोर्ट छ। एयरपोर्टको नजिकै त्यहाँ नरितासन शिन्शोजी मन्दिर छ जसरी माथि चित्रमा देखाइएको छ। थप रूपमा, माउन्ट। नोकोगिरिमा पनि लोकप्रिय छ। चिबा बलात्कार को रूपरेखा खिलै चिबा को प्रिफेक्चर नक्शा मा "Isuimi रेलमार्ग" संग राम्ररी खिल्यो म अन्त मा पढ्न तपाईं धन्यवाद। मेरो बारेमा बान कुरोसवा "Kanto क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ" फिर्ता मा फिर्ता म लामो Nihon Keizai Shimbun (NIKKEI) को लागी एक वरिष्ठ सम्पादक को रूप मा काम गरीरहेको छु र वर्तमान मा एक स्वतन्त्र वेब लेखक को रूप मा काम। NIKKEI मा, म जापानी संस्कृति मा मिडिया को प्रमुख संपादक थियो। मलाई जापानको बारेमा धेरै रमाईलो र चाखलाग्दो चीजहरू दिनुहोस्। अधिक विवरणको लागि कृपया यस लेखलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्। सम्बन्धित पोष्टहरू: सैतामा प्रान्त: चीचिबू, नागोटोरो, हिट्सुजियामा पार्क, इत्यादि। फुकुई प्रान्त: सिफारिश गरिएका साइटहरू गर्न उत्तम आकर्षणहरू र चीजहरू! जापानी रेस्टुरेन्ट र उत्सव मियाजाकी प्रिफेक्चर: सर्वश्रेष्ठ आकर्षण र चीजहरू Shizuoka प्रान्त: उत्तम आकर्षणहरू र Ibaraki प्रान्त गर्न चीजहरू: हिटाची समुद्रीतट पार्क भ्रमण गर्न लायक छ! माई प्रिफेक्चर: जापानमा उपयोगी रहेको हवाईजहाज, रेलमार्ग, बसहरू र ट्याक्सीहरूको सम्बन्धित साइटहरू क्यानागावा प्रान्त: योकोहामा, कामकुरा, एनोशिमा, हाकोने, इत्यादि चमकदार वसन्त र टाढा हिउँद दृश्य: १० राम्रा तस्विरहरूबाट! फोटोहरू: क्योटो २०१२ जापानमा कोडाईजी मन्दिर जापान चेरी ब्लोसम पूर्वानुमान: थोरै पहिले वा सामान्य जस्तो
सैतामा प्रान्त टोक्योको उत्तर तर्फ अवस्थित छ। यहाँ धेरै पार्क र शहरहरू छन् जुन तपाईं टोकियोबाट सजिलै भेट्न सक्नुहुनेछ। हालसालै काभोगो शहर लोकप्रिय छ जहाँ इडो अवधिका धेरै पुराना भवनहरू सुरक्षित छन्। सामग्रीको तालिका सायताचिचिबु मेट्रोपोलिटन क्षेत्र बाह्य भूमिगत डिस्चार्ज च्यानलको बाह्यरेखा साईतमा चिचिबुको नक्शा साइतामा प्रान्तको ओनोची उपत्यकामा कडा जाडो महिनाहरूमा शटरस्टक मेट्रोपोलिटन क्षेत्र बाह्य भूमिगत डिस्चार्ज च्यानल मेट्रोपोलिटन क्षेत्र बाहिरी भूमिगत डिस्चार्ज च्यानल = शटरस्टक म अन्तमा पढेर तपाईंको कदर गर्छु। मेरो बारेमा बान कुरोसवा "Kanto क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ" फिर्ता मा फिर्ता म लामो Nihon Keizai Shimbun (NIKKEI) को लागी एक वरिष्ठ सम्पादक को रूप मा काम गरीरहेको छु र वर्तमान मा एक स्वतन्त्र वेब लेखक को रूप मा काम। NIKKEI मा, म जापानी संस्कृति मा मिडिया को प्रमुख संपादक थियो। मलाई जापानको बारेमा धेरै रमाईलो र चाखलाग्दो चीजहरू दिनुहोस्। अधिक विवरणको लागि कृपया यस लेखलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्। सम्बन्धित पोष्टहरू: तस्विरहरू: चिचिबुमा कडा हिउँदको मौसममा आईफिकल्स गिफु प्रिफेक्चर: उत्तम आकर्षणहरू र गर्नुपर्ने कामहरू फोटो: माउन्ट। टाकाओ- मिशेलिन--तारे पर्यटन गन्तव्य तोतोरी प्रान्त! सर्वश्रेष्ठ आकर्षण र गर्नु पर्ने चीजहरू: हीराइजुमीको चुसनजी मन्दिर, इवाटे प्रान्त शिजोओका प्रान्त: माई प्रान्तको सर्वश्रेष्ठ आकर्षण र कुराहरु: सर्वश्रेष्ठ आकर्षण र गर्नु पर्ने कुराहरु फोटोहरु: मारुनौची - टोक्यो स्टेशन इबाराकी प्रान्तको वरिपरि फैशनेबल व्यवसाय जिल्ला: हिटाची समुद्रतट पार्क एक यात्रा लायक छ! शिगा प्रान्त! सर्वश्रेष्ठ आकर्षणहरू र चीजहरू गर्नलाई Yamanashi प्रान्त: उत्तम आकर्षण ...
गुन्मा प्रान्त कन्टो क्षेत्रको उत्तरपश्चिमी भागमा अवस्थित छ। यस क्षेत्रमा एक पटक सेरीकल्चर र टेक्सटाईल उद्योग सेवा दिँदै जापानको आधुनिकीकरणमा यसले ठूलो योगदान पुर्‍यायो। गुम्मा प्रान्तमा ओज छ। यस राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पैदल यात्राको लागि सिफारिश गरिएको छ। विषयवस्तुको तालिकामा गुन्माओजको रूपरेखाको रूपरेखा मूनको गुन्मा ओजको नक्शा मईको वरिपरि धेरै ओरा मार्शलल्याण्डमा हिउँ पग्लिए पछि सानो सेतो "मिजुबासो" बढ्छ = एडोबस्टक म तपाईंलाई अन्तमा पढ्ने प्रशंसा गर्छु। मेरो बारेमा बान कुरोसवा "Kanto क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ" फिर्ता मा फिर्ता म लामो Nihon Keizai Shimbun (NIKKEI) को लागी एक वरिष्ठ सम्पादक को रूप मा काम गरीरहेको छु र वर्तमान मा एक स्वतन्त्र वेब लेखक को रूप मा काम। NIKKEI मा, म जापानी संस्कृति मा मिडिया को प्रमुख संपादक थियो। मलाई जापानको बारेमा धेरै रमाईलो र चाखलाग्दो चीजहरू दिनुहोस्। अधिक विवरणको लागि कृपया यस लेखलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्। सम्बन्धित पोष्टहरू: फोटोहरू: Wakayama प्रान्त, जापान Wakayama प्रान्त मा Kmano Kodo तीर्थयात्रा मार्ग! कानागावा प्रान्त: गर्नु पर्ने उत्तम आकर्षण र कुराहरु: योकोहामा, कामकुरा, एनोशिमा, हाकोन, आदि। नागानो प्रान्त: Shizuoka Prefecture गर्नका लागि उत्तम आकर्षण र कुराहरु: जापानमा उत्तम आकर्षणहरू र गर्न सक्ने कुराहरु! सबै भन्दा राम्रो मौसम। हिमालहरू पनि सुन्दर छन्! यामनाशी प्रान्त उत्कृष्ट आकर्षण र चीजहरू गर्न को लागी चम्किने वसन्त र टाढा हिउँद दृश्य: १० राम्रा चित्रहरूबाट! सैतामा प्रान्त: चीचिब्बू, नागोटोरो, हित्सुजीयामा पार्क, आदि।
टोकियो, कामकुरा र कानागावा प्रान्तमा हाकोने र तोचिगी प्रान्तको निक्को वरपर रहेका प्रसिद्ध पर्यटन स्थलहरूको बारेमा कुरा गर्न सकिन्छ। निक्कोको एक राजसी तोशोगु तीर्थ छ जुन यस पृष्ठको शीर्ष फोटोमा देखिएको छ। र तपाईं माथि चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ एक अद्भुत राष्ट्रिय पार्क छ। पहाडहरूले घेरिएको चुजेन्जी ताल साँच्चै नै सुन्दर छ। TochigiNikkoNikko Toshogu Shrine (निक्को शहर) आशिकगा फ्लावर पार्क (आशिकगा शहर) को Tochigi सुन्दर wisteria रोशनी को रूपरेखा, Tochigi प्रान्त, जापान = Tochigi निकको नक्शा को Iroha-zaka बाट, सामग्री को तालिका सामग्री को तालिका निक्को ताल चुजेन्जीसम्म, तपाईं शरद inतुमा शटरस्टक निक्को तोशोगु तीर्थ (निक्को शहर) जापानको तोशोगु श्राइन, निक्को, जापानको टोकियो वरपरको उत्तम पारम्परिक भवनहरूको बारेमा कुरा गर्दा म पहिलो पटक निक्को तोशोगु तीर्थको बारेमा सोच्दछु। तोशोगु जापानको विश्व सम्पदा मध्ये एक हो। यसको सौन्दर्य क्योटोको किंकाकुजी मन्दिरसँग तुलना गर्न सकिन्छ। आशिकागा फ्लावर पार्क (आशिकागा शहर) आशिकागा फ्लावर पार्कमा विस्टरिया फूलहरू। तोचिगी प्रिफेक्चर अप्रिलको अन्तदेखि मे महिनाको शुरुमा, जब चेरी फूलहरू फूलेको समाप्त हुन्छ, विस्टरिया फूलहरू जापानमा चरम सीमामा छन्। आशिकागा फ्लावर पार्क जापानमा सबैभन्दा विस्टरिया फूलहरूको साथ फूल पार्क हो। १०,००,००० m² साइटमा फूलेको विस्टरिया फूलहरू एलईडीद्वारा प्रकाशित गरिनेछ र साँझ पछि राम्ररी चम्किनेछन्। विस्टरिया फूलहरूको सुरुnel पनि अद्भुत छ। म तपाईंलाई अन्त मा पढ्न कदर गर्छु। "क्यान्टो क्षेत्रको सर्वश्रेष्ठ" फिर्ता बारेमा ...
इबाराकी प्रान्त टोकियोको उत्तरपूर्वी भागमा अवस्थित छ र प्रशान्त महासागरको सामना गर्दछ। मिटो सहरमा जो प्रिफेक्चुरल अफिसको स्थान हो, त्यहाँ एक प्रसिद्ध जापानी बगैंचा कैराकुएन छ। र, लगभग २ घण्टा टोक्यो स्टेशन बाट एक्सप्रेस बस बाट, हिताची समुद्रतट पार्क छ। यस विशाल पार्कमा, त्यहाँ अचम्मको फूल बगैंचाहरू छन् जुन माथिको फोटोमा देखिएका छन्। विभिन्न फूलहरू बर्ष भर खिलिरहेका छन्। विषयवस्तुको तालिका इबाराकीहिताची समुद्रतट पार्ककोशीमा-जिंगु श्राइनओराइ-इसोसाकी जिन्जा श्रीइनफुकुरोदा-नो-टाकी (फुकुडा वाटरफॉल) इबाराकी हिटची समुद्रीत पार्क हिटाची समुद्रीत पार्क का नक्शा शूटर कास्किरचुस्चृचृक शृma्गस्क्राक्चुरूचि - -इसोसाकी जिंजा तीर्थ "कामिसो नो तोरी गेट" ओराइ-इसोसाकी जिन्जा तीर्थ, इबाराकी प्रान्त = शटरस्टॉक फुकुरोडा-नो-टाकी (फुकुडा झरना) फुकुनदा-नो-टाकी (फुकुडा झरना) जाडोमा फ्रिज गरिएको - एडोबस्टक म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु अन्त्य मेरो बारेमा बान कुरोसवा "Kanto क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ" फिर्ता मा फिर्ता म लामो Nihon Keizai Shimbun (NIKKEI) को लागी एक वरिष्ठ सम्पादक को रूप मा काम गरीरहेको छु र वर्तमान मा एक स्वतन्त्र वेब लेखक को रूप मा काम। NIKKEI मा, म जापानी संस्कृति मा मिडिया को प्रमुख संपादक थियो। मलाई जापानको बारेमा धेरै रमाईलो र चाखलाग्दो चीजहरू दिनुहोस्। अधिक विवरणको लागि कृपया यस लेखलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्। सम्बन्धित पोष्टहरू: फोटोहरू: इबाराकी प्रान्तमा हिताची समुद्रतट पार्क फोटोहरू: "कामिसो नो तोरी गेट" को लागी Oarai-Isosaki Jinja Shrine-Famous फोटोहरू: इबाराकी प्रान्तमा काशिमा-जिंगु तीर्थ फोटोहरू: फुकुरोडा-नो-टाकी (फुकुडा जलप्रवाह) Best सर्वश्रेष्ठ फ्लावर जापान मा बगैचा: Shikisai-no-oka, फार्म तोमिता, हिताची समुद्रतट पार्क ... फोटो: आशिकगा फ्लावर पार्क ...
चुबु क्षेत्रमा त्यहाँ धेरै पर्यटन स्थलहरू छन् जुन जापानलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ जस्तो कि माउन्ट। फुजी, मत्सुमोटो, तातेयामा, हकुबा, टाकायामा, शिराकावागो, कनाजावा र इसे। यो भन्न सकिन्छ कि यस क्षेत्र मा धेरै विविध आकर्षणहरु भेला छन्। यस पृष्ठमा, म Chubu क्षेत्र रूपरेखा बनाउन चाहन्छु। तालिका ...
माउन्ट फुजी (यामानशी, शिजुओका प्रान्त)
कनाजावा (ईशिकावा प्रान्त)
शिजुओका प्रान्त टोकियो र नागोया बीच प्रशान्त महासागर छेउमा अवस्थित छ। शिजुओका प्रान्तको पूर्वी भागमा यामानशी प्रान्तको बीचमा माउन्ट फुजी छ। जब तपाईं टोकियो देखि क्योटोमा Shinkansen सवारी गर्नुहुन्छ, तपाईं दायाँ विन्डोमा माउन्ट फुजी देख्न सक्नुहुन्छ। शिंकान्सेनबाट देखिएको माउन्ट फुजी सिजुओका प्रान्तको कारखानाहरूको पछाडि छ। हुनसक्छ तपाई निराश हुनुहुन्छ कि माउन्ट। फुजी कारखाना संग छ। यद्यपि माउन्ट फुजी प्रशान्त महासागर छेउमा बस्ने मानिसहरूसँग इतिहासमा रहेको छ। र माउन्ट फुजी प्रशान्त पक्ष को कारखानाहरु प्रशस्त पानी संग आशीर्वाद छ। कृपया बुझ्नुहोस् कि माउन्ट फुजी त्यस्तो परिचित पहाड हो। यदि तपाईं माउन्ट हेर्न चाहनुहुन्छ भने। Fuji समृद्ध प्रकृति द्वारा घेरिएको, यो उत्तर पक्ष को Ymanashi प्रान्त देखि हेर्न राम्रो लाग्न सक्छ। सामग्रीको तालिका ShizuokaMt को रूपरेखा। शिजुओका माउन्ट फुजी र चेरी ब्लोसमको फुलेको रूपरेखा पूर्ण रूपमा खिलिएको छ जस्तो देखिन्छ तनुकी तालिका, फुजिनोमिया शहर, शिजुओका प्रान्त, जापान = Shizuoka माटोको एडोबस्टक नक्शा। Fuji म अन्त मा तपाईं पढ्न प्रशंसा। मेरो बारेमा "कुब्बु क्षेत्रको सर्वश्रेष्ठ" मा फर्कनुहोस् बोन कुरोसवा मैले लामो समयदेखि निहोन केजाई शिम्बुन (NIKKEI) को लागि वरिष्ठ संपादकको रूपमा काम गरें र हाल स्वतन्त्र वेब लेखकको रूपमा काम गर्दैछु। NIKKEI मा, म जापानी संस्कृति मा मिडिया को प्रमुख संपादक थियो। मलाई जापानको बारेमा धेरै रमाईलो र चाखलाग्दो चीजहरू दिनुहोस्। अधिक विवरणको लागि कृपया यस लेखलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्। सम्बन्धित पोष्टहरू: निगाता प्रान्त: उत्तम आकर्षणहरू र चीजहरू यमानाशी प्रान्तमा: उत्तम आकर्षणहरू र चीजहरू ...
यामानशी प्रान्त माउन्टको उत्तर तर्फ अवस्थित छ। फुजी यामानशी प्रान्तको कावागुचिको र ताल मोटोसु आदिबाट देखिएको माउन्ट फुजी धेरै सुन्दर छ। प्रिफेक्चुरल कार्यालयको साथ कोफु शहर बेसिनमा अवस्थित छ जुन अ gra्गुर र रक्सी उत्पादन गर्ने क्षेत्रको रूपमा प्रसिद्ध छ। उत्तर तर्फ जापानी आल्प्सको पर्वतहरू जस्तै माउन्ट। Yatsugatake। सामग्रीको तालिका YamanashiMt को रूपरेखा। यामानशी ह्वाइट हंसको फुजी रूपरेखा माउन्ट फुजीको साथ यामानाका तालमा, यामानासी, जापान = शटरस्टक नक्शा यामानशी माउंटको। Fuji म अन्त मा तपाईं पढ्न प्रशंसा। मेरो बारेमा "कुब्बु क्षेत्रको सर्वश्रेष्ठ" मा फर्कनुहोस् बोन कुरोसवा मैले लामो समयदेखि निहोन केजाई शिम्बुन (एनआईकेकेआई) का लागि वरिष्ठ सम्पादकको रूपमा काम गरें र हाल स्वतन्त्र वेब लेखकको रूपमा काम गर्दैछु। NIKKEI मा, म जापानी संस्कृति मा मिडिया को प्रमुख संपादक थियो। मलाई जापानको बारेमा धेरै रमाईलो र चाखलाग्दो चीजहरू दिनुहोस्। अधिक विवरणको लागि कृपया यस लेखलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्। सम्बन्धित पोष्टहरू: फोटोहरू: माउन्ट। बिहान सूर्योदय शिजुओका प्रान्तमा फुजी: उत्तम आकर्षणहरू र निगाता प्रान्तमा गर्नुपर्ने चीजहरू: सर्वश्रेष्ठ आकर्षण र एमोरी प्रान्त गर्न चीजहरू! सर्वश्रेष्ठ आकर्षण र फोटोहरू गर्न चीजहरू: के तपाईंलाई "जापान आल्प्स" थाहा छ? टोटोरी प्रिफेक्चर! कानागावा प्रिफेक्चर गर्नका लागि सर्वश्रेष्ठ आकर्षण र कुराहरु: योकोहामा, कामकुरा, एनोशिमा, हाकोने, इत्यादि शिगा प्रान्त! उत्कृष्ट आकर्षण र चीजहरू गर्न को लागी चम्किने वसन्त र टाढा हिउँद दृश्य: १० राम्रा चित्रहरूबाट! टोयामा प्रिफेक्चर: उत्तम आकर्षण र यमगाता प्रान्त गर्न चीजहरू! क्योटो प्रिफेक्चर गर्नका लागि सर्वश्रेष्ठ आकर्षण र चीजहरू! सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र गर्न चीजहरू
नागानो प्रान्तमा जापानलाई प्रतिनिधित्व गर्ने धेरै पर्यटक आकर्षणहरू छन्, जस्तै हाकुबा, कामिकोची, र मत्सुमोोटो। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई नागानोको विभिन्न आकर्षक संसारहरूमा परिचय दिनेछु। सामग्रीको तालिका नागानोमत्सुमोटोको कामिकोची हाकुबा तातेयमा कुरोबे अल्पाइन मार्ग टोगाकुशी जिगोकुदानी याएन-कोएन कारुइजावा किरिगामाइनसुमागो नागानो नक्शाको नगानो मत्सुमोटोको रात्रिमा पानीमा राम्रो प्रतिबिम्ब। यो पूर्वी जापानको होन्शु, मत्सुमोटो-शि, चुबु क्षेत्र, नागानो प्रान्त, जापान = शटरस्टॉक मत्सुमोटो नागानो शहर पछि नागोनो प्रान्तको सबैभन्दा ठूलो शहर हो भन्ने जापानी प्रमुख ऐतिहासिक किल्ला हो। जब तपाईं मात्सुमोटो शहर हुँदै जानुहुन्छ, तपाईंले फेला पार्नुहुनेछ कि परम्परागत स्ट्रीसकेप बाँकी छ। थप रूपमा, तपाई मत्सुमोटोका वरपर 3000००० मिटर अग्लो पहाडहरूको सुन्दर दृश्यको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। यस शहरको मुख्य आकर्षण भनेको मात्सुमोटो क्यासल हो। हिमेजी क्यासल (ह्योगो प्रिफेक्चर), जुन जापानमा सबैभन्दा लोकप्रिय हो, शुद्ध सेतो छ, जबकि मत्सुमोटो क्यासल मर्यादित जेट कालो हो। महल १ tower०० तिर बनाइएको टावर राष्ट्रिय खजाना हो। धेरै पर्यटकहरूले यस महल टावरलाई वरपरका हिउँका पहाडहरूको पृष्ठभूमिमा चित्रण गर्छन्। कामिकोची होटका पहाडहरू र कापाको पुल, कामिकोची, नागोनो, जापान = शटरस्टक हकुबा हकुबामा तपाईं जापानको प्रतिनिधित्व गर्ने राम्रा पहाडहरू हेर्दै स्कीइ enjoyको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ = शटरस्टक हकुबा तात्यामा कुरोबेमा ग्रीष्म शटरस्टॉक ततेयामा कुरोबे अल्पाइन मार्ग कुरोबे बाँधको लागि लोकप्रिय छ। टाप्यामा कुरोबे अल्पाइन मार्गमा अल्पाइन मार्ग = शटरस्टक, तपाईं ,1600००० मीटरको उचाईमा हिमाली क्षेत्रहरूको नजिकबाट दृश्य पाउन सक्नुहुनेछ = शटरस्टक टेट्यामा कुरोबे अल्पाइन मार्ग पहाड हो ...
निगाता प्रान्त जापानको सागरमा पर्छ। जाडोमा जाडो बादलहरू जापानको सागरबाट आउँछन्, पहाडहरूमा हिर्काउँदछन् र हिउँ पर्न दिउँदछ। त्यसैले निगाटा प्रान्तको पर्वतीय पक्ष एक भारी हिम वर्षा क्षेत्र भनेर चिनिन्छ। निगाटा प्रान्तको पहाडमा विशाल स्की रिसोर्टहरू छन् जस्तै नाएबा, ज्योत्सेटु कोकुसाई र यस्तै। तपाईं सजिलै त्यहाँ टोकियो स्टेशनबाट जोएत्सु शिन्कानसेन जान सक्नुहुन्छ। हिउँको गुणवत्ता हाकुबा र निसेको भन्दा हल्का नम छ। सामग्रीको तालिका निगाटा तोकामाची रूपरेखा निगताका मानिसहरूले हिउँ, स्की, स्नो बोड खेल्न रमाउँदछन्, गाला युजावा स्की रिसोर्ट, निगाता प्रान्त, जापान = निगरता टोकमाची टोकमाचीको नक्शा निता प्रान्तमा = शटरस्टक म अन्तमा पढ्दा तपाईलाई कदर गर्छु। मेरो बारेमा "कुब्बु क्षेत्रको सर्वश्रेष्ठ" मा फर्कनुहोस् बोन कुरोसवा मैले लामो समयदेखि निहोन केजाई शिम्बुन (NIKKEI) को लागि वरिष्ठ संपादकको रूपमा काम गरें र हाल स्वतन्त्र वेब लेखकको रूपमा काम गर्दैछु। NIKKEI मा, म जापानी संस्कृति मा मिडिया को प्रमुख संपादक थियो। मलाई जापानको बारेमा धेरै रमाईलो र चाखलाग्दो चीजहरू दिनुहोस्। अधिक विवरणको लागि कृपया यस लेखलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्। सम्बन्धित पोष्टहरू: तोटोरी प्रान्त! सर्वश्रेष्ठ आकर्षणहरू र चीजहरू Shizuoka Prefecture: उत्तम आकर्षण र Aomori प्रान्त गर्न चीजहरू! Toyama प्रिफेक्चर गर्न सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र कुराहरु: उत्तम आकर्षण र कुरा Yamagata प्रान्त गर्न! हिरोशिमा प्रिफेक्चर गर्नका लागि सर्वश्रेष्ठ आकर्षण र कुराहरु! सर्वश्रेष्ठ आकर्षण र कोची प्रान्त गर्न चीजहरू! सर्वश्रेष्ठ आकर्षण र ईशिकवा प्रान्त गर्न चीजहरू: सर्वश्रेष्ठ ...
आइची प्रान्त प्रशान्त महासागर छेउमा छ। केन्द्रमा नागोया शहर छ। नागोया चुबु क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो शहर हो। शोगुनेटको युगमा, टोकुगावा परिवारले सीधा यस क्षेत्रमा शासन गर्‍यो। नागोया महल जुन त्यस समयमा निर्माण गरिएको थियो इम्पीरियल प्यालेस (एडो महल), ओसाका महल, हिमेजी महल र यस्तै अरू चीजहरूसँग तुलना गर्न सकिने विशाल महल छ। Inuyama शहर, Aichi, जापान मा Aichi Inuyama महल को रूपरेखा Aichi को = शटरस्टक नक्शा म अन्त मा पढ्न तपाईं धन्यवाद। मेरो बारेमा "कुब्बु क्षेत्रको सर्वश्रेष्ठ" फिर्तामा फर्कनुहोस् बोन कुरोसवा मैले लामो समयदेखि निहोन केजाई शिम्बुन (NIKKEI) को लागि वरिष्ठ संपादकको रूपमा काम गरें र हाल स्वतन्त्र वेब लेखकको रूपमा काम गर्दैछु। NIKKEI मा, म जापानी संस्कृति मा मिडिया को प्रमुख संपादक थियो। मलाई जापानको बारेमा धेरै रमाईलो र चाखलाग्दो चीजहरू दिनुहोस्। अधिक विवरणको लागि कृपया यस लेखलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्। सम्बन्धित पोस्टहरू: फुकुई प्रिफेक्चर: शिजुओका प्रान्तका सर्वश्रेष्ठ आकर्षण र कुराहरु: इशिकावा प्रान्त गर्न उत्तम आकर्षण र कुराहरु: तोयामा प्रान्त गर्न उत्तम आकर्षण र कुराहरु: यामानशी प्रिफेक्चर गर्न उत्तम आकर्षण र कुराहरु: उत्तम आकर्षण र कुराहरु मियाजाकी प्रान्त : सर्वश्रेष्ठ आकर्षणहरू र गर्नु पर्ने कुराहरु २०१ Japan जापान चेरी ब्लासम पूर्वानुमान: थोरै पहिले वा सामान्य Mie प्रान्त जस्तै: उत्तम आकर्षण र चीजहरू Miyagi Prefecture गर्न! अकिता प्रान्त गर्न सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र चीजहरू! ओसाका प्रान्त गर्न सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र चीजहरू! Hyogo Prefecture गर्न उत्तम आकर्षण र कुराहरु! सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र गर्न चीजहरू
माई प्रिफेक्चर आइची प्रान्तको दक्षिणमा अवस्थित छ। यहाँ प्रसिद्ध Ise मन्दिर छ। दक्षिणमा इसे शिमा मोती संस्कृतिका लागि परिचित छन्। माई प्रान्तमा तातो स्प्रि ,हरू, मनोरञ्जन पार्कहरू, आउटलेट मल्लहरू र अन्यहरूको साथ "नागाशिमा रिसोर्ट" पनि छ। नागाशिमा रिसोर्टको नजिक नाबाना कुनै साटोमा, तपाईं जापानमा सबैभन्दा ठूलो रोशनीको मजा लिन सक्नुहुन्छ। सामग्री तालिका MieIse Jingu ShrineNabana को No Sato रूपरेखा Mie Nabana No Sato बगैचा जाडो मा रात, माई प्रान्त, जापान = Adobe स्टॉक Mie प्रान्त Ise Jingu Shrine Ise jingu Shrine in Mie Prefecture = Shutterstock यदि कसैले सोध्छ भने जुन नम्बर एक Sho हो जापानमा श्राइन, धेरै जापानीहरूले भन्नेछन् कि यो आइसे शहरमा इसे श्राइन हो, मध्य होन्शूको माई प्रान्तमा। Ise Jingu २००० भन्दा बढी वर्ष पहिले निर्माण गरिएको हो भनिन्छ। यो १२ 2000 ठूला र साना तीराहरू मिलेर बनेको छ जुन यस क्षेत्रभरि छरिएका छन् र ती दुईमा सबैभन्दा प्रसिद्ध मानिसहरू नाइकू (内 宮, आन्तरिक तीर्थ) र गेकु (外 宮, बाह्य तीर्थ) हुन्। म बिहान सबेरै Ise Jingu जान सिफारिस गर्दछु। त्यसोभए तपाईंले पक्कै शान्त र भव्य वातावरण महसुस गर्नुहुनेछ। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई १० फोटो सहित Ise Jingu को एक भागमा परिचय दिनेछु। नाबाना नो सातो रोशनी नबाना नो साटो, माई प्रान्त = शटरस्टक जापानमा चिसो जाडो फेब्रुअरीको अन्त्यसम्म जारी रहनेछ। यस समयमा, रोशनीले तपाईंलाई विभिन्न ठाउँमा स्वागत गर्दछ। अक्टोबर अक्टोबरदेखि मेमा प्रत्येक वर्षको सुरुतिर, शानदार रोशनीहरू ...
Gifu प्रान्त आइची प्रान्तको पश्चिम तर्फ अवस्थित छ। Gifu प्रान्त दक्षिण पक्ष मानो Aria र उत्तर पक्ष मा हिडा क्षेत्र मा विभाजित छ। मिनोमा जिफु शहर र ओगाकी शहर जस्ता शहरहरू छन्। अर्कोतर्फ, हिडामा नागानो प्रान्त जस्तै ठाडो हिमाली क्षेत्रहरू फैलिएका छन्। यहाँ प्रसिद्ध Takayama र Shirakawago छन्। शिराकवागोको उत्तरी भाग टोयामा प्रान्त हो। त्यहाँ Gokayama Shirakawago संग एक सुन्दर गाउँ को रूप मा परिचित छ। सामग्रीको तालिका गिफुशीरकावागो गाउँको टाकायामामागोम बाह्यरेखा Gifu को नक्शा Gifu Shirakawago गाउँ Shirakawago Villadge जाडोमा = Gutu Prefecture Magome मा Shutterstock Takayama Takayama म तपाइँलाई अन्तमा पढ्नको लागि कदर गर्छु। मेरो बारेमा "कुब्बु क्षेत्रको सर्वश्रेष्ठ" मा फर्कनुहोस् बोन कुरोसवा मैले लामो समयदेखि निहोन केजाई शिम्बुन (NIKKEI) को लागि वरिष्ठ संपादकको रूपमा काम गरें र हाल स्वतन्त्र वेब लेखकको रूपमा काम गर्दैछु। NIKKEI मा, म जापानी संस्कृति मा मिडिया को प्रमुख संपादक थियो। मलाई जापानको बारेमा धेरै रमाईलो र चाखलाग्दो चीजहरू दिनुहोस्। अधिक विवरणको लागि कृपया यस लेखलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्। सम्बन्धित पोष्टहरू: फोटोहरू: जागोममा मागोम र त्सुमागो - हिस्टोरिक पोष्ट शहरहरू शिराकावागो: ग्यासो छप्परसहितको परम्परागत गाउँ, जीफु, जापान फोटोहरू: ताकायामा - पहाडी क्षेत्र क्योटो प्रान्तमा सुन्दर पारम्परिक शहरको दृश्य! सर्वश्रेष्ठ आकर्षण र फोटोहरू गर्नका लागि: शिराकावागो, गिफू प्रान्त, जापानमा चार सत्राहरू फोटोहरू: हिउँद चुबु क्षेत्रको शिराकावागो गाउँ! १० प्रान्तहरू टोटोरि प्रान्तमा गर्न उत्तम चीजहरू! सर्वश्रेष्ठ आकर्षण र फोटोहरू गर्न चीजहरू: शरद नागानोको शिराकावागो गाउँ ...
टोयामा प्रान्त जापानको सागरमा छ। टोयामा प्रान्त प्रायः "होकुरीकु क्षेत्र" भनिन्छ इशिकावा प्रान्त र फुकुई प्रान्तको साथ। टोयामा शहरको सहरबाट समेत तपाईं जापानी आल्प्सको उत्तरी भागमा टाटेयामा पर्वत श्रृंखला देख्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक वर्ष, Tateyama पर्वत श्रृंखला मा हिउँ ठूलो वर्षा हुन्छ। जब वसन्त आउँदछ, माथिको तस्वीरले देखाउँदछ, हिउँ हटाइन्छ र बस बग्न थाल्छ। तपाईं बसमा चढ्न सक्नुहुन्छ र हिउँ पर्खाल हेर्न जान सक्नुहुन्छ। टोटेमाटेटेयामा कुरोबे अल्पाइन रूटकोकायमा शोगावा गोर्गे क्रूज टोनामा बर्फी पर्वतको टेट्यामा कुरोबे अल्पाइन मार्गमा जापान गन्तव्य यात्राको सामग्रीको तालिका। टोयामा शहर, जापानको परिदृश्य। = तोयमा तातेयामा कुरोबे अल्पाइन मार्गको शटरस्टक नक्शा तातेयामा कुरोबे अल्पाइन मार्ग विश्वको अग्रणी हिमाली दर्शनीय मार्गहरू मध्ये एक हो जुन Hon००० मीटरको उचाईमा केन्द्रीय होन्शुको पर्वतीय क्षेत्र पार गर्दछ। यो टोयामा प्रान्तको तातेयामा स्टेशनबाट नागानो प्रान्तको जेआर शिन्नो-ओमाची स्टेशन सम्मको एक जटिल मार्ग हो जसको कुल लम्बाई करीव 3000० किलोमिटर लम्बाई र १, 40 1,975 मिटरको उचाई अन्तर रहेको छ। मार्गमा, तपाईं केबल कार, रोपवे र बसहरू प्रयोग गरेर दर्शनीय दृश्यहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ। Tateyama Kurobe Alpine मार्ग हिउँदमा बन्द छ जब पहाडहरूमा ठूलो हिउँ हुन्छ। यो मध्य अप्रिल देखि नोभेम्बर को अन्त्य सम्म खुला छ। वसन्त youतुमा तपाईं हिउँको अद्भुत संसारको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। गर्मी मा, तपाईं राम्रो अल्पाइन वातावरण को अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। र मा ...
इशिकावा प्रान्त जापानको सागरमा पर्छ। टोयामा प्रान्त र फुकुई प्रान्त संगै ईशिकावा प्रान्त, प्रायः "होकुरीकु क्षेत्र" भनिन्छ। इशिकवा प्रान्तको प्रिफेक्चुरल कार्यालयको साथ कानाजावा शहर होकुरीकु क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो पर्यटन शहर हो। परम्परागत जापानी टाउनस्केप र आश्चर्यजनक जापानी बगैंचा "केनरोकुएन" यहाँ छोडियो। माथिको तस्वीर कानाजावाको जापानी बगैंचा "केन्रोकुएन" हो। केन्रोकुएनमा, जाडोमा रूखका हाँगाहरू बरफको तौलसँग नछोओस् भनेर चित्रमा देखिए अनुसार चित्रलाई डोरीले झुण्ड्याइयो। जापानको सागरबाट चल्ने बतासको साथमा हिउँदमा इशिकावा कटोनाजावा रूपरेखाको नोटलाइन प्रायद्वीपको सामग्रीको तालिका जापानको समुद्री किनारमा जापानको समुद्री किनारमा ईशिकावा प्रान्तको नक्शा ईशिकावा प्रान्त रहेको छ। जिल्लामा निम्न सुविधाहरू छन्: (१) तपाईं ईदो अवधि (१ 1०1603-१-1867)) का विभिन्न परम्परागत संस्कृतिहरूको अनुभव लिन सक्नुहुनेछ, (२) तपाईं जाडोमा सुन्दर हिउँद दृश्यको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ, र ()) तपाईं स्वादिष्ट समुद्री खानाको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। जापानको सागरबाट एक विशिष्ट पर्यटन गन्तव्य कानाजावा शहर हो, यस राज्यको राजधानी। अर्को लोकप्रिय गन्तव्य नोटो प्रायद्वीप हो जुन राष्ट्रिय प्रसिद्ध वाकुरा ओन्सेनको घर हो। इतिहास र संस्कृति ईशिकावा प्रान्त माडो परिवार (कागा कुला) द्वारा संचालित थियो, जो इडो अवधि (१ 2०3-१-1603)) मा तोकुगावा शोगुनेट परिवार पछि दोस्रो नम्बर सामन्ती प्रभु थिए। माउदा परिवारले सेनामा भन्दा संस्कृतिमा बढी जोड दिए जुन टोकुगावा परिवारको बिरूद्ध सामन्ती कबीले थिएन भन्ने अपील गर्न। को रूपमा ...
फुकुई प्रान्तमा जापानको समुद्री किनार पनि छ। फुकुई प्रान्तलाई अक्सर "होकुरीकु क्षेत्र" भनिन्छ कानाजावा प्रान्त र टोयामा प्रान्त संग। फुकुई प्रान्तमा "Eiheiji" नामको पुरानो ठूलो मन्दिर छ। यहाँ तपाईं Zazen ध्यान अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। फुकुई प्रान्त एक ठाउँ हो जहाँ डायनासोरको धेरै हड्डीहरू उत्खनन गरिन्छ। डायनासोर संग्रहालय बच्चाहरूमा लोकप्रिय छ। सामग्रीको तालिका फुकुईइहीजी मंदिर आईचिजोदनीको बाहिरी रूप: पुनःस्थापित समुराई शहरको रूपरेखा फुकुइको नक्शा इखिजी मन्दिर ईचिजोदनी: पुनर्स्थापित समुराई शहर म तपाईंलाई अन्तमा पढिरहेको प्रशंसा गर्दछु। मेरो बारेमा "कुब्बु क्षेत्रको सर्वश्रेष्ठ" मा फर्कनुहोस् बोन कुरोसवा मैले लामो समयदेखि निहोन केजाई शिम्बुन (एनआईकेकेआई) का लागि वरिष्ठ सम्पादकको रूपमा काम गरें र हाल स्वतन्त्र वेब लेखकको रूपमा काम गर्दैछु। NIKKEI मा, म जापानी संस्कृति मा मिडिया को प्रमुख संपादक थियो। मलाई जापानको बारेमा धेरै रमाईलो र चाखलाग्दो चीजहरू दिनुहोस्। अधिक विवरणको लागि कृपया यस लेखलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्। सम्बन्धित पोष्टहरू: तस्विरहरू: Ichijodani -Restored समुराई शहर ईशिकावा प्रान्त: Iwate प्रान्त को लागी उत्तम आकर्षण र कुराहरु! सर्वश्रेष्ठ आकर्षण र फूड्स, विशेषता फुकुशिमा प्रान्त! सर्वश्रेष्ठ आकर्षण र चीजहरू Yamaguchi Prefecture गर्न! सर्वश्रेष्ठ आकर्षणहरू र Oita प्रान्त गर्न चीजहरू: क्योटो प्रिफेक्चर गर्नका लागि उत्तम आकर्षण र कुराहरु! Hyogo Prefecture गर्न उत्तम आकर्षण र कुराहरु! माई प्रिफेक्चर गर्नका लागि सर्वश्रेष्ठ आकर्षण र कुराहरु: उत्तम आकर्षणहरू र चीजहरू सागा प्रान्त: गर्नका लागि उत्तम आकर्षण र चीजहरू Wakayama Prefecture! उत्तम आकर्षणहरू र आईचि प्रान्तका लागि चीजहरू: उत्तम आकर्षणहरू र गर्नुपर्ने कामहरू
जापानमा, कान्टो क्षेत्र जहाँ टोकियो अवस्थित छ र क्यान्टो क्षेत्र जहाँ क्योटो र ओसाका अवस्थित छन् प्राय जसो तुलना गरिन्छ। कन्साई क्षेत्रको मुख्य विशेषता यो हो कि क्योटो, ओसाका, नारा, कोबे, आदि जस्ता प्रत्येक क्षेत्र धेरै अनौंठो हुन्छ। यदि तपाईं कन्साई क्षेत्रमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, तपाईं ...
जब तपाईं क्योटोमा यात्रा गर्नुहुन्छ, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछ शिगा प्रान्तमा यात्रा गर्नुहोस् यदि तपाईंसँग समय छ। सर्वप्रथम, जापानको सबैभन्दा ठूलो ताल, बिवा लेकमा "मिशिगन" डु boat्गा लिनु चाखलाग्दो हुनेछ। तालको वरिपरिको पुराना मन्दिरहरूको वरिपरि घुम्नु राम्रो विचार हो। यस तालको वरिपरि, मानिसहरूले पुरानो शैलीको दिगो जीविकाको पालन गरिरहेका छन्, त्यसैले यस्तो जीवनशैली अन्वेषण गर्न अद्भुत छ। सामग्रीको तालिका शिगाहाइजान एनर्याकुजी मन्दिर मिशिगन क्रूज बिवाको उपत्यकाको ताकाशिमा शहरमा मेटासेक्विया रूखहरूको पछाडि शिगा सारांशको शिगा नक्शा शिगा प्रान्तको शिगो प्रान्तको पश्चिमी भागमा अवस्थित छ। तसर्थ, यो प्रान्त लामो समयदेखि क्योटोको साथ विभिन्न ईतिहासहरूको चरणहरू भएको छ। धेरै ऐतिहासिक काठका भवनहरू शिगा प्रान्तको पश्चिमी भागमा छोडियो जुन क्योटोको नजिकै छ। यी मध्ये, त्यहाँ दृश्यहरू छन् जुन तपाईं क्योटोमा यात्रा गर्दा अवलोकन योग्य हुनुहुन्छ। धेरै ऐतिहासिक काठका भवनहरू शिगा प्रान्तको पश्चिमी भागमा छोडियो जुन क्योटोको नजिक छ। यी मध्ये, त्यहाँ दृश्यहरू छन् जुन तपाईं क्योटोमा यात्रा गर्दा अवलोकन योग्य हुनुहुन्छ। र शिगा प्रान्तको बीचमा झील बिवा हो, करिब २ 235 किलोमिटर परिधि। यो जापानको सबैभन्दा ठूलो ताल हो। तपाईं यहाँ रमाइलो डु boat्गामा चढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रमाईलो डु very्गा धेरै राम्रा छ। बिवा तालको पूर्वी तट लामो समयदेखि प्रमुख यातायात केन्द्र हो। यस कारणले गर्दा पूर्वी तटमा हिकोन महल भनिने एक शक्तिशाली महल छ। यो महल ...
त्यहाँ मियामा जस्ता राम्रा ग्रामीण क्षेत्रहरू छन् र क्योटो प्रान्तमा Ine जस्तै अनौंठा माछा मार्ने गाउँहरू। क्योटोको कुरा गर्दा, क्योटो शहर, यस प्रान्तको केन्द्र, प्रसिद्ध छ, तर किन यसको वरिपरि अचम्मका क्षेत्रहरूमा जाने छैन? सामग्रीको तालिका क्योटो प्रान्तको मियामाइने क्योटो प्रान्तको बाह्यरेखा क्योटो प्रान्तको नक्शा क्योटो उत्तर र दक्षिणमा लामो प्रान्त हो। उत्तर जापानको समुद्री किनारमा पर्छ र हिउँद हिउँदमा पर्दछ। क्योटो प्रान्तको दक्षिणी भागमा, पुरानो परम्परागत शहरहरू जस्तै क्योटो सिटी र उजी शहरहरू छन्। अर्कोतर्फ, क्योटो प्रान्तको मध्य र उत्तरी भागमा विभिन्न परम्परागत बस्तीहरू छन्। यी मध्ये, त्यहाँ पर्यटक आकर्षणहरु जुन पर्यटकहरु बीच धेरै लोकप्रिय छ। ती गाउँहरूमा जान समय लाग्छ। जहाँसम्म, यदि तपाईंले बस्तीहरू भ्रमण गर्नुभयो भने, तपाईंले क्योटो शहर भन्दा फरक अद्भुत संसार फेला पार्नुहुनेछ। मियामा मियामा तपाई शान्त जापानी ग्रामीण परिदृश्य = एडोबस्टक मियामा कायाबुकिनोसाटो क्योटो जापानको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ, शीतल = शटरस्टक मियामा क्योटो प्रान्तको मध्य भागमा अवस्थित सुन्दर ग्रामीण गाउँ हो। त्यहाँ लगभग २ 250० जापानी शैलीका घरहरू छन्। परम्परागत जापानी ग्रामीण गाउँहरु को कुरा, Gifu प्रान्त को Shirakawago पर्यटकहरु मा प्रसिद्ध छ। यद्यपि क्योटोमा मियामासँग पनि एक सुन्दर जापानी ग्रामीण परिदृश्य छ। यदि तपाईं यस गाउँको वरिपरि टहलनुभयो भने, तपाईं पुरानो जापानी परिदृश्यको मजा लिन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक, तपाईं यो परम्परागत घरमा बस्न सक्नुहुन्छ। चार asonsतुहरूको परिवर्तन अनुसार यस गाउँको दृश्यहरू राम्ररी परिवर्तन हुन्छन्। यदी तिमी ...
यदि तपाईं क्योटो स्टेशनबाट ट्रेनमा नारा शहर जानुहुन्छ भने, तपाईं चकित हुनुहुनेछ कि त्यहाँ त्यस क्षेत्रमा अझै शान्त पुरानो संसार बाँकी छ। यसबाहेक, यदि तपाई इकारुगा जस्ता क्षेत्रमा जानुहुन्छ भने तपाई पुरानो अवधिको जापान भेट्न सक्नुहुन्छ। नारा प्रान्तले तपाईंलाई जापानमा आमन्त्रित गर्दछ जुन पुरानो र गहिराइ हो। सामग्रीको तालिका नाराटोडाइजी मन्दिरनारा पार्कको कासुगताइशा तीर्थाइन होरियोजी टेम्पलेट माउंट। योशिनो नाराको नक्शा नाराको सारांशमा नीलो हिमाली सिल्हूटहरू सूर्योदयमा। कुखुरा नीलो काल्पनिक परिदृश्य। ओडा, नारा, जापान = इटरुगा, नारा प्रान्तमा शटरस्टक रात। तोकीजी मन्दिरको मन्दिर धरहरा र चन्द्रमा बीचको भिन्नता सुन्दर छ = शटरस्टॉक नारा प्रान्त क्योटोको दक्षिणी भागमा अवस्थित छ। उत्तर-पश्चिमी भागमा नारा बेसिन छ, तर अन्य क्षेत्रहरू प्रायः पहाडहरू हुन्। नारा बेसिनको केन्द्र नारा शहर हो। क्योटोभन्दा पहिले जापानको राजधानी नारा नै स्थान हो। नारा प्रकृतिले धनी एउटा शान्त शहर हो। यहाँ धेरै आश्चर्यजनक मन्दिरहरू र मन्दिरहरू छन् जुन क्योटोसँग तुलना गर्न सकिन्छ। दक्षिण प्रान्तको दक्षिणी भागमा विशाल पहाड र पठार फैलिएको छ। ती मध्ये, योशिनो पहाडी क्षेत्र भनिने वन क्षेत्र छ। त्यहाँ माउन्ट छ। योशिनो, जुन यहाँ चेरी ब्लास्म स्पटको रूपमा धेरै प्रख्यात छ। पहुँच जरी नारा प्रान्त जापानको मध्यमा अवस्थित छ, यातायात नेटवर्क आश्चर्यजनक रूपमा विकसित भइरहेको छैन। एयरपोर्ट नारा प्रान्तमा कुनै एयरपोर्टहरू छैनन्। यदि तपाईं हवाईजहाजबाट नारा प्रान्तमा जान चाहानुहुन्छ भने तपाईं कन्साइ एयरपोर्ट प्रयोग गर्नुहुनेछ।
ओसाकाको कुरा गर्ने हो भने यो ओसाका शहरको डोटनबोरीमा चम्पी नियोन साइनबोर्डका लागि प्रख्यात छ। ओसाका मा एक शक्तिशाली मान्छे को संस्कृति छ। त्यो ओसाकामा मात्र नभएर समग्र ओसाका प्रान्तमा पनि भन्न सकिन्छ। किन तपाई ओसाका राम्ररी मन पराउनुहुन्न? ओसाका प्रान्तको सामग्री की रूपरेखा ओसटा प्रान्त कशिवाडा बाह्यरेखा ओसाका प्रान्तको कुरोमोन ईचिबा एक विशाल बजार हो जसमा विक्रेताहरू सडक खाना, ताजा उत्पादन र शेलफिश बेच्ने गर्दछन्, साथै ओसाका प्रवर्तक ओसाका = शटरस्टक नक्शा पश्चिमी जापानको केन्द्र हो। यसको जनसंख्या लगभग 8.8.। मिलियन छ, जुन जापानको टोकियो र कानगावा प्रान्तको छेउमा छ। ओसाका प्रान्त क्योटो प्रान्तको पश्चिम तर्फ र समुन्द्रको अनुहार नारा प्रान्तको नजिकै छ। तसर्थ, यो प्राचीन कालदेखि क्योटो र नारा पूरक शहरको रूपमा विकसित भएको छ। ओसाका प्रान्तले सागरको सामना गरिसकेकोले यो विशेष गरी व्यापारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। ओसाकाको प्रमुख विशेषता यो हो कि धेरै प्रभावशाली व्यापारीहरू प्राचीन कालदेखि नै बसोबास गरिरहेका छन् र जापानको अर्थव्यवस्थाको केन्द्रको रूपमा यस क्षेत्रको विकास गरेका छन्। इडो युगको अन्तिम चरणमा, टोकियो धेरै विकसित भयो र ओसाकालाई पार गर्ने शहरको रूपमा बढ्यो। आज, टोकियो एक विशाल ठूलो शहर भएको छ, तर ओसाकाका मानिसहरुमा टोकियोको बिरूद्धको बिरोध भावना छ। र ओसाकाका मानिसहरूले उनीहरूको जीवन संस्कृतिको कदर गर्दछन्। यस ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमिको कारण, यदि तपाईं ओसाका जानुहुन्छ भने तपाईं टोकियोबाट केही फरक संस्कृतिको आनन्द लिनुहुनेछ। शहरको केन्द्रमा ...
वाकायामा प्रान्तमा पवित्र र परम्परागत विश्वहरू छन् जुन ओसाका र क्योटो जस्ता शहरी क्षेत्रहरूमा अवस्थित छैनन्। यस प्रान्तमा धेरै पर्वतहरू छन्। त्यस्ता क्षेत्रहरूमा बौद्ध धर्म जस्ता तालिम दिने ठाउँहरू स्थापना र मर्मत गरिएको छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाई कोयासन जानुहुन्छ, तपाई समृद्ध प्रकृतिमा धेरै भव्य विश्व भेट्न सक्नुहुनेछ। विषयवस्तु वाकायामा कोयासनकुमानो कोडो तीर्थयात्रा मार्गको रूपरेखा वाकायामा को रूपरेखा फुसियागामियोजी वेधशाला (कुमानो कोडो तीर्थयात्रा मार्ग) बाट आएको दृश्य, वाकायामा प्रान्त, जापान = शटरस्टक मानचित्र वाकायामा सारांश वाकायामा प्रान्तको मध्य भागमा रहेको छ। वाकायामा क्षेत्रको दक्षिणी भागमा त्यहाँ विशाल हिमाली क्षेत्र फैलिएको छ। वाकायामा प्रान्त अन्य कन्साई प्रान्तहरू भन्दा विकासमा ढिला भयो। यसैले पुरानो ऐतिहासिक भवनहरू र तीर्थयात्रा मार्गहरू यहाँ सुरक्षित छन् र समृद्ध प्रकृति पनि बाँकी छ। एकचोटि जब तपाई वाकायामा प्रान्तको आकर्षण जान्नुहुन्छ, तपाई यहाँ बारम्बार जान चाहानुहुन्छ। मौसम र वाकायामा प्रान्तको मौसम जब वाकायामा प्रान्तको बारेमा परिचय दिँदै, मैले वाकायामा प्रान्तको मौसम स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ। यदि तपाई वाकायामा प्रान्तको दक्षिणी भागमा जानुहुन्छ भने त्यहाँ धेरै वर्षा भएको कुरालाई ध्यानमा राख्दै यात्राको लागि तयारी गर्नु राम्रो हुन्छ। वाकायामा प्रान्तको दक्षिणी भागमा, वार्षिक वर्षा २००० मिमी भन्दा बढी हुन्छ। विशेष गरी हिमाली क्षेत्रहरु र Nachikatsura टाउन वरपर, वर्षा ठूलो छ र वार्षिक वर्षा 2000००० मिमी भन्दा बढी छ। हालसालै भारी वर्षा र आँधीबेहरीले रेकर्ड गर्न सक्ने भारी वर्षा हुन सक्छ, त्यसैले ...
ह्योगो प्रान्तमा हिमेजी क्यासल छ, पर्यटक आकर्षण जसले जापानलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। लगभग सबै महल टावर र यस महलको टावरहरू बाँकी छन्। यस महलले चित्रण गरेको रूपमा, ह्योगो प्रान्तमा जापानको प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न पर्यटक आकर्षणहरू छन्। तपाईं ह्योगो प्रान्तमा किन गहिरो यात्रा गर्नुहुन्न? HyogoHimeji महल （Himeji शहर) को सामग्री को तालिका कोबेअरिमा ओन्सेन (Kobe शहर) Kinosaki Onsen (Toyooka शहर) Hyogo को Hyogo नक्शा को रूपरेखा, म पहिले Hyogo प्रान्तमा बस्नुभएको छ। मलाई यो प्रिफेक्चर मन पर्छ। मलाई लाग्छ Hyogo प्रान्तमा तीन पक्षहरू छन्। सर्वप्रथम, यो यातायातको एक प्रमुख हब हो जुन पश्चिम जापान र कन्साई क्षेत्रका विभिन्न भागहरूलाई जोड्दछ। त्यसैले ह्योगो प्रान्तमा, हिमेजी क्यासल १ century औं शताब्दीमा निर्माण गरिएको थियो। तोकुगावा शोगुनेटले हिमेजी क्यासलमा पश्चिम जापानबाट शत्रुहरूलाई रोक्न निर्णय गरे। दोस्रो, यो कन्साई क्षेत्र प्रतिनिधित्व गर्ने व्यापारको आधार हो। उन्नाइसौं शताब्दीमा, कोबेको बन्दरगाह ह्योगो प्रान्तको दक्षिणी भागमा निर्माण गरिएको थियो। यो बन्दरगाह विदेश देशहरू र कन्साई क्षेत्रलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण आधार हो। तेस्रो, त्यहाँ ह्योगो प्रान्तको उत्तरमा धेरै पुरानो जापानीहरू छन्। विशेष गरी टोयोका शहरमा जापानको समुद्री किनारमा, त्यहाँ एउटा पुरानो स्पा शहर छ जसलाई किनोसाकी ओन्सेन भनिन्छ। तपाई ह्योगो प्रान्तमा यस्तो पुरानो जापान भेट्न सक्नुहुन्छ। हिमेजी क्यासल （हिमेजी सिटी) चेरी खिलने मौसममा हिमेजी क्यासल, हिमेजी, जापान = पिक्सटा हिमेजी, जापान हिमाजी कैसलमा वसन्तमा चेरी खिलने मौसमको लागि शटरस्टक हिमेजी कासल जापानको सबैभन्दा सुन्दर महल भनिन्छ। ...
चुगोको क्षेत्रको दर्शनीय स्थलहरू व्यक्तित्वमा धनी छन् जुन एक शब्दमा व्याख्या गर्न सकिदैन। यसको विपरीत, यदि तपाईं Chugoku क्षेत्र मा यात्रा, तपाईं विभिन्न दर्शनीय स्थल को मजा लिन सक्नुहुन्छ। यस क्षेत्रको दक्षिण पक्ष शान्त सेतो इनल्यान्ड सागरको सामना गर्दछ। त्यहाँ शान्त स्थलहरू छन् ...
मियाजीमा (हिरोशिमा प्रान्त)
म्यात्सु (Shimane प्रान्त)
ओकायामा प्रान्त एक शीतोष्ण क्षेत्र हो जुन सेतो इनल्यान्ड सागरको सामना गर्नु पर्दछ। यस क्षेत्रको कुराशिकी शहरमा, परम्परागत जापानी सडकहरू संरक्षित छन्। Okayama शहर Okayama महल र Korakuen बगैचा छ। ओकायामा प्रान्त तुलनात्मक रूपमा ओसाका र हिरोशिमाको नजिक छ, त्यसैले यदि तपाईं पश्चिमी जापानमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, तपाईं सजीलै ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ। ओकायामा प्रान्त एक पूल द्वारा Shikoku संग जोडिएको छ, तपाईं Okayama बाट Shikoku को यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। ओकेयामासेटो ओहाशी ब्रिजकोराशिकी कोराकुएन गार्डन कोजीमा जीन्स स्ट्रीट रूपरेखा ओरायामा सेतो ओहाशी पुलको ओरामा पुल, ओरायामा प्रान्त, जापानको कुराशीकी शहरमा रहेको माउन्ट वाशु लुकआउटबाट सामग्रीको तालिका। सेतो ओहाशी पुल एउटा पुल हो जुन कुराशीकी शहर, ओकायामा प्रान्त र साकाइड शहर, कागवा प्रान्त = शटरस्टक ओपयामा ओकायामा प्रान्तको नक्शा, जो एक शान्त क्षेत्र हो। यो क्षेत्र जलवायु र आर्थिक दुवै मा आशीर्वाद छ। ओकायामा प्रान्तको मौसम र मौसम ओकायामा प्रान्तको मौसम वर्षभरि धेरै शान्त रहन्छ। ओकायामा प्रान्तको उत्तरी भागमा पहाडहरू छन्। यदि जाडो मौसम जाडोमा उत्तरी जापान सागरबाट आयो भने, हिमालहरूले यसलाई रोक्दछन्। यसैले हिउँ पक्कै तल झर्दछ। गर्मीमा, प्रशान्त महासागरबाट वर्षाको बादल दक्षिण दिशामा आउँदछ, तर ओकायामा प्रान्तको दक्षिणी भागमा रहेको शिकोको पहाडहरूले यसलाई रोक्दछन्। त्यसैले यो यति कठिन वर्षा हुनेछैन। ओकायामा प्रान्त ओकायामा प्रान्तको अर्थव्यवस्था आर्थिक हिसाबले खराब छैन। ओकायामा प्रान्त ओसाकाको नजिक छ र यातायात सुविधा राम्रो छ। त्यसोभए ओकायामा प्रान्तमा विविध उद्योगहरू छन्। धेरै कारखानाहरू तटीय क्षेत्रमा अवस्थित छन्। यसबाहेक, किनकि ...
हिरोशिमा प्रान्त चुगोकु जिल्लाको केन्द्र हो। प्रिफेक्चुरल अफिसको स्थानको साथ हिरोशिमा शहर दोस्रो विश्व युद्धको समयमा परमाणु बमले क्षतिग्रस्त शहरको रूपमा प्रसिद्ध छ। यदि तपाईं हिरोशिमा जानुभयो भने, तपाईं प्रसिद्ध म्यूजियम भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ जुन ती दिनहरू सम्झनामा रहन्थ्यो। एकै साथ तपाईले यो शहरको शक्ति अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ जुन पछि पुन: निर्माण गरियो। हिरोशिमामा मियाजीमा टापु छ जुन एक धेरै लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण हो। हिरोशिमाको यात्राले तपाईंलाई धेरै राम्रा अनुभवहरू दिनेछ। सामग्री तालिका हिरोशिमा प्रान्त मियाजीमा (इटुकुशिमा तीर्थ) को शिखर हेरोशिमा शहर शिमनामी कैडोओनोमिची शहर हिरोशिमा प्रान्त का नक्शा हिरोशिमा प्रान्तको सारांश दुईवटा दर्शनीय स्थलहरू छन् जुन यात्राको दौराबाट हटाउन सकिदैन। एउटा सेतो इनल्यान्ड सागरमा रहेको मियाजीमा टापु हो। र अर्को हिरोशिमा सहरको हिरोशिमा पीस मेमोरियल संग्रहालय हो। हीरोशिमा प्रान्त पश्चिमी जापानको सेतो इनल्यान्ड सागर सामना गर्ने शान्त क्षेत्रमा अवस्थित छ। यो प्रान्त "शिमानामी काइदो" नामको सेतो इनल्याण्ड सागरको अर्को पट्टि शिकिकोको एहिम प्रान्तसँग जोडिएको छ। यस पुलबाट तपाईं सुन्दर सेतो इनल्यान्ड सागरको दृश्यको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। शिमानमी कैदोको सुरूवात ओनोमिचि सिटी, हीरोशिमा प्रान्त हो। ओनोमिची एउटा सुन्दर शहर हो जुन अक्सर फिल्म स्थानको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। तपाइँ ओनोमिची द्वारा रोक्न सक्नुहुन्छ। पहुँच विमानस्थल मिहारा शहरमा हिरोशिमा एयरपोर्ट, हीरोशिमा प्रान्त छ। यो विमानस्थलबाट जेआर हिरोशिमा स्टेशन पुग्न लगभग by 45 मिनेट छ। हिरोशिमा एयरपोर्टमा, निर्धारित उडानहरू निम्नसँग सञ्चालन गरिन्छ ...
तोतोरी प्रान्त चुगोकु जिल्लाको जापान सागर छेउमा छ। यो प्रान्त जापान मा कम से कम जनसंख्याको साथ क्षेत्रहरु मध्ये एक हो। यस प्रान्तको जनसंख्या 560,000०,००० मात्र छ। तर यस शान्त संसारमा तपाईको दिमागलाई निको पार्ने धेरै ठाउँहरू छन्। यस पृष्ठमा, म तोतोटीरी प्रान्तमा घुमाउने ठाउँहरू आदि परिचय गर्नेछु। सामग्री को तालिका TorroriTottori Sand Sandes Kaike Onsen को रूपरेखा टोरोरी पोइन्ट्स को रूपरेखा Tottori प्रान्त Chugoku क्षेत्र को जापान समुद्री किनारमा अवस्थित छ। यो पूर्वी क्षेत्रको १२ 125 किलोमिटर र उत्तर 60० किलोमिटर उत्तर-दक्षिणको विस्तारित क्षेत्र हो। यस कारणका लागि, तोतोरी प्रिफेक्चर प्राय: पूर्वपट्टि र पश्चिम तर्फ छुट्टै वर्णन गरिन्छ। तोतोरी प्रान्तको पश्चिम तर्फको केन्द्र तोतोरी शहर हो। यस शहरमा उत्तम पर्यटक आकर्षण तोतोरी दुने हो। यो बालुवाको झिल्ली पूर्व र पश्चिममा करिब १ 16 किलोमिटर, उत्तर र दक्षिणमा करिब २.2.4 किलोमिटर फैलिएको छ र यसलाई जापानको सबैभन्दा ठूलो बालुवाको रूपमा चिनिन्छ। जापान सामान्यतया हरियालीमा धनी छ, यस्तै ठूलो बालुवा झुकाव असामान्य छ। पूर्वी तोतोरी प्रान्तमा हिउँद प्रायः जाडोमा पर्छ। जे होस्, यसले धेरै ढेर गर्दैन। यहाँ जाडोमा, तपाईं धेरै स्वादिष्ट क्र्याब खान सक्नुहुन्छ। तोतोरी प्रान्तको पश्चिम तर्फको केन्द्र योनागो शहर हो। यस शहरमा काइके ओन्सेन भनिने एक स्पा शहर छ। यस क्षेत्रमा पनि क्रेबहरू जाडोमा धेरै स्वादिष्ट हुन्छन्। एक्सेस एयरपोर्ट तोतोरी प्रिफेक्चरमा दुईवटा एयरपोर्टहरू छन्: टोटोरी एयरपोर्ट तोटोरी एयरपोर्ट लगभग अवस्थित छ ...
पूर्व प्रसिद्ध लेखक पैट्रिक लाफ्काडियो हर्न (१ 1850०-१1904 70 100) शिमाने प्रान्तको म्यात्सुमा बस्थे र यो भूमिलाई धेरै माया गर्थे। Shimane प्रान्तमा, मानिसहरूलाई आकर्षित गर्ने एक सुन्दर संसार बाँकी छ। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई Shimane प्रान्त मा एक विशेष अद्भुत पर्यटन गन्तव्य परिचय गराउनेछु। सामग्रीको तालिका ShimaneMatsueAdachi संग्रहालय ArtIzumo Taisha ShrineOku-Izumo क्षेत्र Iwami GinzanOki द्वीपमासुदा Shimane को नक्शा Shimane अंक भौगोलिक Shimane प्रान्त Chugoku क्षेत्र को उत्तर पश्चिमी मा स्थित छ, र जापान को समुद्र को सामना। सामान्यतया, Chugoku जिल्ला मा जापान को समुद्र को क्षेत्र "San'in" भनिन्छ, त्यसैले Shimane प्रान्त San'in क्षेत्र को सम्बन्धित छ। यस प्रान्तको उत्तरपश्चिमी भागमा Shimane प्रायद्वीप छ। ताल नाकाउमी र शिन्जी ताल मुख्य भूमि र यो प्रायद्वीपको बीचमा छ। तपाईंले ओकी टापुहरू भेट्टाउनुहुनेछ शिमने प्रायद्वीपको north०-१०० किलोमिटर उत्तरमा। रेलवे पहुँच गर्नुहोस् यो Okoama बाट Tottori प्रान्त मा योनागो मार्फत JR को उपयोग गर्न सजिलो छ रेलमार्ग बाट Shimane प्रान्त भ्रमण गर्न। एयरपट्स Shimane प्रान्तमा तीन एयरपोर्टहरू छन्। प्रान्तको पूर्वी भागमा इजुमो एयरपोर्ट, इवामी एयरपोर्ट (यसलाई हागी-इवामी एयरपोर्ट पनि भनिन्छ) प्रान्तको पश्चिमी भागमा र ओकी टापुहरूमा ओकी एयरपोर्ट। इजुमो एयरपोर्ट इजुमो एयरपोर्ट शिन्जी तालको पश्चिमी तटमा अवस्थित छ। Izumo र Matsue शहरहरू द्वारा रोक्न यो सुविधाजनक छ। इवामी एयरपोर्ट इवामी एयरपोर्ट मसुदा शहरको5किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित छ। ओकी एयरपोर्ट ओकी एयरपोर्ट ओकी टापुहरूमा डोगो टापुको दक्षिण किनारमा अवस्थित छ। Shimane Matsue सम्बन्धित सिफारिश भिडियो बाट बाट ...
यामागुची प्रान्त प्रिफेक्चर हो जुन होन्शुको पश्चिमी भाग हो। यामागुची प्रान्तले दक्षिणतर्फ शान्त सेतो इनल्याण्ड सागरको सामना गर्नुपर्दछ, जबकि उत्तर पक्षले ज wild्गली जापानी समुद्रको सामना गर्दछ। शिन्कानसेन यस प्रान्तको दक्षिणी क्षेत्रमा चल्छ, तर उत्तर क्षेत्रमा यो प्राप्त गर्न असुविधाजनक हुन्छ। किनकि यस प्रान्तमा विभिन्न क्षेत्रहरू छन्, कृपया तपाईंको मनपर्ने पर्यटन स्थल सबै तरिकाले फेला पार्नुहोस्। सामग्रीको तालिका यामागुचीकिन्ताकियो पुलअक्योशिदाई र अकोयोशिदोहागी मोटोनोसुमी तीर्थको रूपरेखा बाह्य रूपरेखा यमागुची प्रान्तको = शटरस्टॉक नक्शा यामागुची पोइन्टहरूमा दर्शनीय स्थलहरू वास्तवमै अवस्थित छन्। यदि तपाईं मुख्य गन्तव्यको रूपमा हिरोशिमा प्रान्तको साथ यात्राको योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई इवाकुनी शहरको किन्टाक्यो पुलमा जान सिफारिस गर्दछु, जुन हिरोशिमा प्रान्तको नजिक छ। किन्टाइको एक धेरै रोचक पुल हो। यदि तपाईं प्रकृतिमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं मिसकीको अकियोशिदाईमा जानुहोस्। जापानमा सबैभन्दा ठूलो चुनढुंगा गुफा छ। यदि तपाइँ जापानी इतिहास र परम्परागत भवनहरूमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाई यामागुची प्रान्तको उत्तरी भागको हागी शहरमा जानुहोस्। उन्नाइसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा, जागीले तोकुगावा शोगुनेटको अन्त्य गरे र आधुनिकीकरणको गति बढाएपछि हागीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। एक्सेस एयरपोर्ट यामागुची प्रान्तमा यामागुची उबे एयरपोर्ट छ। यामागुची उबे एयरपोर्टमा, निर्धारित उडानहरू टोकियोको हनेडा एयरपोर्टसँग मात्र सञ्चालन भइरहेको छ। जो मानिस टोकियोबाट यामागुची प्रान्तमा जान्छन्, शिन्कानसेन भन्दा हवाईजहाजको प्रयोग गर्न अलि बढी नै हुन्छ। जे होस्, यदि तपाईको गन्तव्य यामागुची प्रान्तमा छ भने ...
पश्चिमी जापानको शिकोको टापुमा, बीचमा ठाडो र विशाल हिमाली क्षेत्र फैलिएको छ। यी पहाडहरू द्वारा विभाजित, त्यहाँ चार प्रान्तहरू छन्। यी प्रान्तहरु को प्रत्येक धेरै व्यक्तिगत छ। यदि तपाई शिकोकू टापुको भ्रमण गर्नुहुन्छ भने तपाई4चाखलाग्दो संसारको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ! सामग्रीको तालिका ShikokuWikcome को Shikoku को आउटलाइन! रूपरेखा ...
नौशिया टापु (कागवा प्रान्त)
ताकामात्सु (कागवा प्रान्त)
मत्सुयामा (एहीम प्रान्त)
टोकुशिमा प्रान्त सिकोकु टापुको कन्साई क्षेत्रबाट नजिकको क्षेत्र हो। टोकुशिमा प्रान्त गर्मीमा आयोजित हुन नृत्य (आवा ओडोरी) को लागि धेरै प्रख्यात छ। त्यहाँ अन्य आकर्षणहरू छन् जस्तै नरुटो भँवरो (नरुटो उजुशीयो) र ओत्सुका म्यूजियम आर्ट। यस पृष्ठमा, म सिफारिश गरिएको ठाउँहरू आदि तोकुशीमा प्रान्तमा परिचय गर्दछु। टोकुशिमाआवा नृत्य (आवा ओडोरी) नारुतो भर्लपूलहरू (नरुटो उजुशीयो) आर्टिया काजुरा ब्रिज रूपरेखाको ओटसुका संग्रहालय टोकुशिमा प्रान्त भूगोल टोकुशिमा प्रान्त जापानको शिकोकु टापुको उत्तरपूर्वी भागमा अवस्थित छ। प्रान्तको उत्तरी भागमा तोकुशिमा मैदान बाहेक, यो धेरै हिमालहरूको क्षेत्र हो। विशेष गरी, टोकुशिमा मैदानको दक्षिणी भागमा रहेको शिकोोक पहाडहरू पश्चिमी जापानको सबैभन्दा असभ्य पहाडी क्षेत्रहरू मध्ये एक हो। यी हिमालहरूबाट धेरै नदीहरू बगिरहेका छन्। पहुँच एयरपोर्ट टोकुशिमा प्रान्तमा टोकुशिमा एयरपोर्ट छ। यो एयरपोर्ट टोकुशिमा शहरको केन्द्रबाट km किलोमिटर पूर्वोत्तरमा अवस्थित छ जुन टोकुशिमा मैदानको बीचमा छ। टोकुशिमा एयरपोर्टमा, निर्धारित उडानहरू तलका एयरपोर्टहरूसँग सञ्चालन हुन्छन्। टोक्यो / हनेडा फुकुओका सप्पोरो / शिन Chitose = गर्मी मा सञ्चालन रेलवे Shinkansen टोकुशिमा प्रान्तमा संचालित छैन। JR Shikoku तोकुशीमा प्रान्तमा निम्न मार्गहरू संचालन गर्दछ। यी रेलवेद्वारा, तोकुशिमा प्रान्त सिकोकू टापुको अन्य प्रान्तहरूसँग जोडिएको छ। टोकुशिमा लाईन कोटोकु लाइन नरुटो लाइन मुगी लाइन डोसान लाइन बस बस टोकुशिमा स्टेशनसम्म कोशी र ओसाका जस्ता कन्साई क्षेत्र शहरहरूबाट आकाशी काकियो पुल प्रयोग गरी सीधा बसहरू छन्। ...
कागवा प्रान्त सिकिको टापुको उत्तरपूर्वी भागमा अवस्थित छ। यो प्रिफेक्चर ओकायामा प्रिफेक्चरको विपरीत किनारमा सेतो इनल्यान्ड सागरमा सेतो ओहाशी पुल द्वारा बाध्य गरिएको छ, १२,12,300०० मिटर लम्बाई छ। त्यसोभए, तपाईं यस क्षेत्रमा जान स्वतन्त्र महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। कागवा प्रान्तको अपतटीय टापुहरूमा एउटा अद्भुत संग्रहालय छ। र कागवा प्रान्तमा त्यहाँ स्वादिष्ट उडोन (बाक्लो जापानी नूडल्स) का रेस्टुरेन्टहरू छन्। तपाईं यहाँ किन झार्नुहुन्न? कागावाउडोनबेनेस आर्ट साइट नाओशिमा चिचीबुगाहामा बीचराइट्सुरिन गार्डन कागावा भूगोल र जलवायु कागगा प्रिफेक्चरको नक्शा कागावा नक्शा काउन्टआउटलाइन शिकोकुको उत्तरपूर्वी भागमा अवस्थित छ। यो प्रान्त, ओटोयामा प्रान्त संग सेतो इनल्याण्ड सागरको अर्को पट्टि, एक शीतोष्ण जलवायु संग खर्च गर्न सजिलो छ। सनुकी मैदान समतल उत्तरमा फैलिएको छ र सबै सेतो इनल्यान्ड सागर कुनै पनि आकारको ११ any टापुहरूको साथ डटिएको छ, शोडो शिमा टापु सहित। मुख्य शहरहरू जस्तै ताकामात्सु शहर सनुकी मैदानमा छन्। प्रान्तको दक्षिणी भागमा, १००० मिटरको उचाईमा पर्वतहरू जडिएका छन्। कागावा प्रान्तको केन्द्र स्थान ताकामात्सु शहर हो। यो शहर स्थापना भएको थियो र यो महल शहरको रूपमा विकसित भएको छ किनकि यहाँ १ Tak founded116 मा ताकामात्सु क्यासलको निर्माण भएको थियो। आज, ताकामात्सु शिखोकुको महत्वपूर्ण आगमन बिन्दु र सेतो ओहाशी पुलको समापनको कारण सम्पूर्ण टापुमा अन्वेषणको लागि सुविधाजनक सुरूवातको रूपमा सेवा गर्दछ। १ 1000 .1588। एयरपोर्ट पहुँच कागावा प्रान्तमा ताकामात्सु एयरपोर्ट छ। यसमा ...
एहीम प्रिफेक्चर एक ठूलो क्षेत्र हो जुन शिकोोक टापुको उत्तरपश्चिममा फैलन्छ। धेरै पुरानो जापानी यहाँ छोडिएका छन्। यस क्षेत्रको केन्द्रमा रहेको मत्सुयामा शहरमा तपाईले नक्कल तातो वसन्त सुविधामा नुहाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मत्सुयामा महल पनि छ जहाँ पुराना काठका भवनहरू मत्सुयामामा रहन्छन्। यस क्षेत्रको दक्षिणमा जानुहोस्, तपाईं जंगली पहाड र सागर हेर्न सक्नुहुन्छ। सामग्री को तालिका EhimeMatsuyama CastleDogo ओन्सेन को Ehime नक्शा को बाह्यरेखा Ehime पोइन्ट्स Ehime प्रिफेक्चर Shikoku को उत्तर पश्चिमी भाग मा अवस्थित छ। मौसम नम्र र न्यानो छ, र यो प्रकृतिमा धनी छ। यो सेतो ईन्ल्यान्ड सी, र शिकोको पर्वत पर्वतमाला क्षेत्र हो। Ehime प्रान्त तीन क्षेत्र मा विभाजित छ। पूर्वी पक्ष शीतोष्ण क्षेत्र हो जुन सेतो ईन्ल्यान्ड समुद्रीतर् सामना गर्नु पर्छ। यहाँ "Shimanemi Kaido" ब्रिज सेटो इनल्यान्ड सागरको अर्को पट्टि Okayama प्रान्त लाई जोड्दै छ। यस पुलमा साइकलको लागि सडक कायम गरिएको छ। यस पुलबाट तपाईं शान्तिमय सेतो इनल्यान्ड सागर देख्न सक्नुहुनेछ। एहिमेम प्रान्तको केन्द्रिय भाग भनेको मत्सुयामा शहर वरिपरिको क्षेत्र हो। त्यहाँ धेरै प्रसिद्ध स्थानहरू छन् जस्तै मत्सुयामा महल र डोगो ओन्सेन। अन्तमा, एहिमेम प्रान्तको दक्षिणपश्चिमी भागमा, पुरानो जापानी ग्रामीण इलाका छोडियो। प्रकृति धनी छ, र समुद्र पनि सुन्दर छ। एयरपोर्ट एहिम प्रिफेक्चरमा मत्सुयामा एयरपोर्ट छ। यो एयरपोर्ट मत्सुयामा शहरको केन्द्रबाट kilometers किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित छ। यस एयरपोर्टमा, निर्धारित उडानहरू निम्न एयरपोर्टहरूसँग सञ्चालन हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सियोल / Incheon शंघाई / ...
कोची प्रिफेक्चर शिकोको टापुको दक्षिणपट्टि अवस्थित छ। यस क्षेत्रमा शुद्ध नदीहरू, जंगली केपहरू, र प्रशान्त महासागरको दर्शनीय दृश्यहरूको साथ समुद्र तटहरू छन्। जापानमा धेरै युवाहरू यस वातावरणको लागि आतुर छन् र कोच्चिमा यात्रा गरिरहेका छन्। यदि तपाईं कोची जानुहुन्छ भने निश्चित रूपमा तपाईले आफ्नो यात्राको आनन्द उठाउनुहुनेछ। सामग्री को तालिका कोच्चि कोची कोसल शिमन्तो रिवरकेप अशिजुरी रूपरेखा कोच्चि कोचिको नक्शा कोइ पॉइन्ट्स को नक्शा एक विशाल शिकोकू पर्वत श्रृंखला कोच्चि प्रान्तको उत्तर तिर फैलिन्छ। यो प्रान्त पूरै क्षेत्रफलको is%% सहितको हिमाली क्षेत्र हो। यी हिमालहरूबाट खोलाहरू बग्छन्। ती नदीहरूले अझै पनि बुढेसकालको जापानी नदीको वातावरण छोड्छन्। पहाडहरुको दक्षिणी भागमा एक शानदार प्रशान्त महासागर छ। यदि तपाईं केपमा जानुभयो भने, तपाईं धेरै शक्तिशाली दृश्यहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। यस्तो वातावरणमा कोचीका मानिसहरूले समुद्र बाहिरका देशहरूबारे सोचेका थिए। १ th औं शताब्दीको उत्तरार्धमा तोकुगावा शोगुनेटको युगको अन्त्य गरेर कोचीको समुराई जापानलाई आधुनिकीकरण गर्न धेरै सक्रिय थियो। तपाईं कोच्चि महल र समुद्री तटमा समुराईको समयहरूको छवि बनाउन सक्नुहुन्छ। कोची प्रान्तको मौसम र मौसम कोची प्रान्तमा धेरै घमाइलो दिनहरू छन्, तर एकै साथ धेरै पानी पर्छ। कोची प्रिफेक्चरको वार्षिक घाम घण्टा २००० घण्टा भन्दा बढी छ र जापानमा शीर्ष वर्ग हो। जहाँसम्म, अर्कोतर्फ, वार्षिक वर्षा मैदानहरूमा २ 89०० मिलिमिटर हुन्छ, र हिमालहरूमा 19००० मिलिमिटर भन्दा बढी। नदीहरू यस्तो ...
यदि तपाईं क्युशुमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, कृपया धनी प्रकृतिको आनन्द लिनुहोस्। क्युशुमा त्यहाँ धेरै दर्शनीय स्थलहरू छन् जहाँ तपाईं माउंट सहित शानदार दृश्यहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ। एसो र सकुराजिमा। क्युशुमा त्यहाँ धेरै सक्रिय ज्वालामुखी छन्, त्यसैले त्यहाँ ओन्सेन (हट स्प्रि )्स) यहाँ र त्यहाँ पनि छन्। कृपया तपाईको दिमाग र शरीरलाई ताजा गर्नुहोस् ...
बप्पू, युफुइन (ओइटा प्रान्त)
फुकुओकामा धेरै स्वादिष्ट भोजनहरू छन्। समुद्र नजिक भएकोले, माछा ताजा छ। यसैले फुकुओकामा सुशी सबैभन्दा उत्तम छ। रामेन र मेन्टाइको (मसलादार कोड रो) पनि विशेषताहरू हुन्। फुकुओका शहरको दक्षिणपूर्वको दाजीफु शहरमा दाजाइफु तेन्माng्गु श्राइन नामको ठूलो मन्दिर पनि छ। सामग्रीको तालिका फुकुओकाकावा विस्टरिया गार्डन (Kitakyushu शहर) कोमोजेन-जी मन्दिर (Dazifu शहर) फुकुओका को नक्शा Fukuoka Kawachi Wisteria उद्यान को नक्शा (Kitakyushu शहर) कावाची विस्टरिया गार्डन मा wisteria फूल। किताकियुशु, फुकुओका, क्युशु = फुकुओका प्रान्तको किताक्युशु शहरको शटरस्टॉक कावाची विस्टरिया गार्डन, बगैंचा पार्क हो जहाँ विस्टरिया फूलहरू अत्यन्तै सुन्दर हुन्छन्। अप्रिलको मध्य देखि मेको बीचमा, प्रत्येक वर्ष, सुन्दर विस्टरिया फूलहरू बगैंचामा खिलछन्। कोमोजेन-जी मन्दिर (डाजाइफू शहर) कोजाइजेन जी मन्दिर डाजाइफू शहर, फुकुओका प्रान्त = शटरस्टॉक कोमोजेन-जी मन्दिरमा दुई जापानी बगैंचाहरू छन् जुन २० औं शताब्दीको प्रसिद्ध परिदृश्य आर्किटेक्ट मिरे शिगेमोरीले डिजाइन गरेका थिए। यस मन्दिरको जेन बगैचा क्युशुमा सबैभन्दा उत्तम हो। नोभेम्बरको अन्तमा, शरद colorsतु र colors्गहरू अद्भुत छन्। जे होस्, कृपया ध्यान दिनुहोस् कि यो मन्दिर अनियमित रूपमा बन्द छ। म तपाईंलाई अन्त मा पढ्न कदर गर्छु। "क्युशु क्षेत्रको सर्वश्रेष्ठ" मा फिर्ता जानुहोस् मेरो बारेमा बान कुरोसवा मैले लामो समयदेखि निहोन केजाई शिम्बुन (एनआईकेकेआई) का लागि वरिष्ठ सम्पादकको रूपमा काम गरें र हाल स्वतन्त्र वेब लेखकको रूपमा काम गर्दैछु। NIKKEI मा, म जापानी संस्कृति मा मिडिया को प्रमुख संपादक थियो। मलाई जापानको बारेमा धेरै रमाईलो र चाखलाग्दो चीजहरू दिनुहोस्। कृपया अधिकको लागि यो लेखलाई सन्दर्भित गर्नुहोस् ...
"Yoshinogari खंडहर" छ जो सागा प्रान्तमा जापानको सबैभन्दा ठूलो बर्बाद हो। त्यहाँ जापानी इतिहास को Yayoi अवधि को समयमा गाउँहरु को धेरै निशानहरु छन् (c c ई.पू. देखि c c AD)। यी भग्नावशेषहरू योशिनोगरी ऐतिहासिक पार्कको रूपमा विकसित हुँदैछन्। विभिन्न पुराना घरहरू र किल्लाहरू विशाल विशाल पार्कमा पुनर्स्थापित गरियो, ताकि तपाईं प्राचीन जापानको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। सागाको नक्शाको रूपरेखा म तपाईंलाई अन्तमा पढ्नको लागि सराहना गर्दछु। "क्युशु क्षेत्रको सर्वश्रेष्ठ" मा फिर्ता जानुहोस् मेरो बारेमा बान कुरोसवा मैले लामो समयदेखि निहोन केजाई शिम्बुन (एनआईकेकेआई) का लागि वरिष्ठ सम्पादकको रूपमा काम गरें र हाल स्वतन्त्र वेब लेखकको रूपमा काम गर्दैछु। NIKKEI मा, म जापानी संस्कृति मा मिडिया को प्रमुख संपादक थियो। मलाई जापानको बारेमा धेरै रमाईलो र चाखलाग्दो चीजहरू दिनुहोस्। अधिक विवरणको लागि कृपया यस लेखलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्। सम्बन्धित पोष्टहरू: क्युशु क्षेत्र! Pre प्रान्तहरू मियाजाकी प्रिफेक्चरमा गर्नु पर्ने उत्तम चीजहरू: फुकुई प्रान्तका सर्वश्रेष्ठ आकर्षणहरू र चीजहरू: सिफारिस गरिएका साइटहरू गर्नका लागि उत्तम आकर्षणहरू र चीजहरू! जापानी रेस्टुरेन्ट र उत्सव कागोशिमा प्रिफेक्चर: कुमामोटो प्रान्तका लागि उत्तम आकर्षण र कुराहरु: यामानशी प्रिफेक्चर गर्नको लागि उत्तम आकर्षण र कुराहरु: शिजोओका प्रान्तका लागि उत्तम आकर्षण र कुराहरु: सन् २०१ Japan जापानमा चेरी ब्लोसम पूर्वानुमान: थोरै पहिले वा उस्तै सामान्य Mie प्रान्त जस्तै: उत्तम आकर्षण र ओसाका गर्न चीजहरू! १ Best उत्तम पर्यटक आकर्षणहरू: डोटनबोरी, उमेदा, युएसजे आदि मियागी प्रान्त! सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र गर्न चीजहरू
नागासाकी प्रान्तमा धेरै दर्शनीय ठाउँहरू छन्। नागासाकी आणविक बम स Muse्ग्रहालय नागासाकी शहरमा अवस्थित छ जहाँ प्रिफेक्चुरल कार्यालय अवस्थित छ र यसले अगस्त ११, १ 11 1945 मा परमाणु बम खसाइएको थियो भन्ने अनुभव प्रस्तुत गर्दछ। नागासाकी शहरका धेरै ढलानहरू भएकाले तपाईं पहाडबाट रातको रमणीय दृश्यको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। रातमा। नागासाकी नगासाकी शहरको विषयसूचीआउटलाइन नाउसाकी ईसाई साइटहुइस टेन बॉशगुन्कंजिमा टापु नागासाकीको नक्शा नागासाकी शहर नागासाकी शहर आफ्नो अद्भुत रातको दृश्यको लागि प्रसिद्ध छ = शटरस्टक हिड्न क्रिश्चियन साइटहरू अमाकुसा टापुहरू नागासाकीमा = एडोब स्टक हुइस दस बोश रंगीनको साथ ट्युलीप्स हुइस टेन बॉशमा, नागासाकी जापान = शटरस्टक गुन्कञ्जीमा टापु नागासाकी प्रान्तमा गुंकञ्जीमा टापु = शटरस्टक म तपाईंलाई अन्तसम्म पढ्ने प्रशंसा गर्छु। "क्युशु क्षेत्रको सर्वश्रेष्ठ" मा फिर्ता जानुहोस् मेरो बारेमा बान कुरोसवा मैले लामो समयदेखि निहोन केजाई शिम्बुन (एनआईकेकेआई) का लागि वरिष्ठ सम्पादकको रूपमा काम गरें र हाल स्वतन्त्र वेब लेखकको रूपमा काम गर्दैछु। NIKKEI मा, म जापानी संस्कृति मा मिडिया को प्रमुख संपादक थियो। मलाई जापानको बारेमा धेरै रमाईलो र चाखलाग्दो चीजहरू दिनुहोस्। अधिक विवरणको लागि कृपया यस लेखलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्। सम्बन्धित पोस्टहरू: फोटोहरू: नागासाकी प्रान्त, ह्युस टेन बॉश, क्युशू, जापान फोटोहरू: नागासाकी प्रान्तको गुन्कन्जीमा टापु फोटोहरू: नागासाकी शहर-रमाईलो दृश्यको लागि प्रसिद्ध छ! माई प्रिफेक्चर: कागावा प्रान्तमा सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र चीजहरू! Hyogo Prefecture गर्न उत्तम आकर्षण र कुराहरु! हिरोशिमा प्रिफेक्चर गर्नका लागि सर्वश्रेष्ठ आकर्षण र कुराहरु! सर्वश्रेष्ठ आकर्षणहरू ...
कुमामोटो प्रायः "आगोको देश" भनेर चिनिन्छ। किनभने कुमामोटो प्रान्तमा, त्यहाँ माउन्ट छ। Aso कि अझै ज्वालामुखी गतिविधि जारी छ। यो ज्वालामुखी हेर्नको लागि यो कुमामोटो प्रान्तको एक लोकप्रिय कोर्स हो। कुमामोटो शहरको कुमामोटो महल अब पुनर्स्थापित भइरहेको छ किनकि यसको हिस्सा २०१ big को ठूलो भूकम्पमा भाँचिएको थियो। सामग्रीको तालिका कुमामोटो कुमामोटो कैसलअसकोकुची ओकोशीकी तट बाह्यरेखा कुमामोटो कुमामोटो क्यासलको बाह्यरेखा वसन्तमा चेरी फूलहरूको साथ। कुमामोटो, जापान। कुमामोटो क्यासल हाल मर्मत भइरहेको छ = कुटरमोटो कुमामोटो कैसलको शटरस्टॉक नक्शा कुमुटो कैसल कुशु, जापान = एडोबस्टक यदि तपाईं जापानको सब भन्दा बलियो किल्ला हेर्न चाहानुहुन्छ भने, म कुसुटोमा कुमामोटो क्यासल सिफारिस गर्दछु। २०१ma कुमामोटो भूकम्पले कुमामोटो क्यासललाई भारी क्षति पुर्‍यायो। यस पृष्ठमा फोटोहरू २०१ 2016 अघि लिइएको थियो। महल हालको पुनर्स्थापन अन्तर्गत छ। २०२१ को वसन्तबाट, तपाईं अन्ततः महल टावर भ्रमण गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। यदि तपाईं यस किल्लामा जानुभयो भने, तपाईंले साउराईको वातावरण र उनीहरूको महल सुरक्षित गर्ने स्थानीयहरूको भावना महसुस गर्नुहुनेछ। Aso मा Shorstrstock Kikuchi Kikuchi उपत्यका Kmamoto प्रान्त मा Kuta, Kane Kushu = Ariut सागर मा Okoshiki तट, Kushu = Shutterstock मा Aso क्रेटर म अन्तको लागि तपाईं पढ्न कदर गर्छु। "क्युशु क्षेत्रको सर्वश्रेष्ठ" मा फिर्ता जानुहोस् मेरो बारेमा बान कुरोसवा मैले लामो समयदेखि निहोन केजाई शिम्बुन (एनआईकेकेआई) का लागि वरिष्ठ सम्पादकको रूपमा काम गरें र हाल स्वतन्त्र वेब लेखकको रूपमा काम गर्दैछु। NIKKEI मा, म जापानी संस्कृति मा मिडिया को प्रमुख संपादक थियो। ...
माथिको तस्वीर बेप्पू शहर, ओइटा प्रान्तको दृश्य हो। यो शहर आगोले जलेको छैन। किनभने तातो वसन्त पानी धेरै ठूलो छ, तपाईं स्टीमको साथ यस्तो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। बप्पु शहर नजिकै युफुइन छ जो प्रशस्त प्रकृतिको साथ एक स्पा रिसोर्ट हो। यो शहर विदेशी पर्यटकहरूमा पनि धेरै लोकप्रिय छ। सामग्रीको तालिका OitaBeppu का Olineline को Yufuin को Oita ल्याण्डस्केप, जापान = AdobeStock Oita Beppu को नक्शा म अन्त मा पढ्न तपाईं प्रशंसा गर्दछु। "क्युशु क्षेत्रको सर्वश्रेष्ठ" मा फिर्ता जानुहोस् मेरो बारेमा बान कुरोसवा मैले लामो समयदेखि निहोन केजाई शिम्बुन (एनआईकेकेआई) का लागि वरिष्ठ सम्पादकको रूपमा काम गरें र हाल स्वतन्त्र वेब लेखकको रूपमा काम गर्दैछु। NIKKEI मा, म जापानी संस्कृति मा मिडिया को प्रमुख संपादक थियो। मलाई जापानको बारेमा धेरै रमाईलो र चाखलाग्दो चीजहरू दिनुहोस्। अधिक विवरणको लागि कृपया यस लेखलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्। सम्बन्धित पोष्टहरू: फोटोहरू: बेप्पू ()) विभिन्न स्टाइलहरूमा तातो स्प्रि !हरूको आनन्द लिनुहोस्! कुमामोटो प्रिफेक्चर: तोयामा प्रिफेक्चरका लागि सबैभन्दा राम्रो आकर्षण र कुराहरु: फुकुई प्रान्तमा सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र कुराहरु: मियाजाकी प्रिफेक्चर गर्नका लागि उत्तम आकर्षण र कुराहरु: सर्वश्रेष्ठ आकर्षण र फोटोहरू गर्नुपर्ने कुराहरु: बेप्पू (२) चार सत्रहरुको सुन्दर परिवर्तन! क्योटो प्रान्त! Shizuoka Prefecture गर्न गर्नुपर्ने उत्तम आकर्षण र कुराहरु: २०१ Att लाई गर्न सबैभन्दा राम्रो आकर्षण र कुराहरु जापान चेरी ब्लासम पूर्वानुमान: थोरै पहिले वा सामान्य Mie प्रान्त जस्तै: उत्तम आकर्षण र चीजहरू Miyagi Prefecture गर्न! अकिता प्रान्त गर्न सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र चीजहरू! सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र गर्न चीजहरू
मियाजाकी प्रान्तको टाकाचीहो घाटी क्युशुमा टुरिस्ट आकर्षणहरू मध्ये एक हो। -80०-१०० मिटर उचाईको चट्टान 100 किलोमिटरसम्म जारी रहन्छ। तपाईं यस उपत्यकामा डु boats्गा पनि खेल्न सक्नुहुनेछ। सामग्रीको तालिका मियाजाकी टाकाछिहोको बाह्यरेखा मियाजाकी म्याकाकी नक्शाको नक्शा टाकाचिहो म तपाईंलाई अन्त सम्म पढ्नको लागि प्रशंसा गर्दछु। "क्युशु क्षेत्रको सर्वश्रेष्ठ" मा फिर्ता जानुहोस् मेरो बारेमा बान कुरोसवा मैले लामो समयदेखि निहोन केजाई शिम्बुन (एनआईकेकेआई) का लागि वरिष्ठ सम्पादकको रूपमा काम गरें र हाल स्वतन्त्र वेब लेखकको रूपमा काम गर्दैछु। NIKKEI मा, म जापानी संस्कृति मा मिडिया को प्रमुख संपादक थियो। मलाई जापानको बारेमा धेरै रमाईलो र चाखलाग्दो चीजहरू दिनुहोस्। अधिक विवरणको लागि कृपया यस लेखलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्। सम्बन्धित पोष्टहरू: तस्बिरहरू: मियागाकी प्रान्त कुमामोटो प्रान्तमा ताकाचीहो: कागोशिमा प्रिफेक्चर गर्नका लागि उत्तम आकर्षण र कुराहरु: ओइटा प्रान्तमा गर्ने उत्तम आकर्षण र कुराहरु: फुकुई प्रान्तमा उत्तम आकर्षण र कुराहरु: सागा प्रान्तमा उत्तम आकर्षण र कुराहरु: उत्तम आकर्षण। र Gifu Prefecture गर्न कुराहरु: Best आकर्षण र कुरा गर्न Yamanashi प्रान्त: उत्तम आकर्षण र Mie प्रान्त गर्न कुराहरु: उत्तम आकर्षणहरु र Miaagi प्रान्त गर्न चीजहरु! अकिता प्रान्त गर्न सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र चीजहरू! सर्वश्रेष्ठ आकर्षणहरू र यमगाता प्रान्त गर्न चीजहरू! सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र गर्न चीजहरू
कागोशिमा प्रान्त क्युशुको दक्षिणी भागमा अवस्थित छ। यस प्रान्तमा माथीको ज्वालामुखी सकुराजिमा छ जसरी माथिको तस्वीरमा देखाइएको छ। साकुराजिमा कागोशिमा शिको तटमा अवस्थित छ। तपाईं डु by्गाबाट सकुराजिमा जान पनि सक्नुहुन्छ। सामग्रीको तालिका कागोशिमा याकुशिमा टापुको रूपरेखा कागोशिमाको नक्शा कागोशिमा याकुशिमा टापुको विशाल देवदाराहरू, हजारौं वर्ष पुरानो, यकुशिमा टापुमा जंगली हुर्कियो = शटरस्टक म अन्तमा पढ्दा तपाईलाई कदर गर्छु। "क्युशु क्षेत्रको सर्वश्रेष्ठ" मा फिर्ता जानुहोस् मेरो बारेमा बान कुरोसवा मैले लामो समयदेखि निहोन केजाई शिम्बुन (एनआईकेकेआई) को लागि वरिष्ठ संपादकको रूपमा काम गरें र हाल स्वतन्त्र वेब लेखकको रूपमा काम गर्दैछु। NIKKEI मा, म जापानी संस्कृति मा मिडिया को प्रमुख संपादक थियो। मलाई जापानको बारेमा धेरै रमाईलो र चाखलाग्दो चीजहरू दिनुहोस्। अधिक विवरणको लागि कृपया यस लेखलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्। सम्बन्धित पोष्टहरू: नागासाकी प्रान्त: माई प्रान्तको लागि सबैभन्दा राम्रो आकर्षण र कुराहरु: सर्वश्रेष्ठ आकर्षण र गर्नु पर्ने कुराहरु फोटो: नागासाकी प्रान्त क्युशु क्षेत्रको गुन्कंजीमा टापु! Pre प्रान्तहरू मियाजाकी प्रिफेक्चरमा गर्न उत्तम चीजहरू: सर्वश्रेष्ठ आकर्षण र توटोरि प्रिफेक्चर गर्ने कुराहरु! उत्तम आकर्षणहरू र चीजहरू सागा प्रिफेक्टु: सर्वश्रेष्ठ आकर्षण र चीजहरू Wakayama Prefecture गर्न! सर्वश्रेष्ठ आकर्षणहरू र गर्नको लागि सिफारिश गरिएको जापानी स्थानीय साइट! पश्चिम जापान (Chugoku, Shikoku, Kushu, Okinawa) Ehime प्रान्त! उत्तम आकर्षण र कुरमामोटो गर्न चीजहरू: उत्तम आकर्षणहरू र चीजहरू नगानो प्रान्त: गर्नका लागि उत्तम आकर्षण र चीजहरू।
जापान एक टापु देश हो, र यो धेरै टापुहरु मिलेर बनेको छ। सफा समुद्र वरपर फैलिरहेको छ। यदि तपाईं जापान मा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं ओकिनावा जस्तो समुद्री तटहरूमा जानुहोस्। समुद्र किनारमा कोरल चट्टानहरू, र रंगीन माछा पौंडी पोखरीहरू छन्। स्नोर्कलिंगको साथ, तपाईं एक अद्भुत संसारको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। यस पृष्ठमा, म ओकिनावाको तटहरू परिचय गर्दछु। ओकिनावामा, समुद्रमा पौडी खेल्ने मौसम अप्रिलको आसपास शुरू हुन्छ। यद्यपि ओकिनावाको वास्तविक गर्मी मौसम मेदेखि अक्टुबरसम्म हो। स्थानीय मानिसहरू सागरमा प्रायः जुन सेप्टेम्बर सम्म पौडिन्छन्। कृपया नोट गर्नुहोस् कि तपाईंले कुनै पनि मौसममा पौडिनको लागि भिजेको सूट लगाउनु पर्छ। व्यक्तिगत नक्शामा क्लिक गर्नुहोस्, गुगल नक्शा एक अलग पृष्ठमा प्रदर्शित हुनेछ। यदि तपाईंलाई मनपर्दछ भने, कृपया तल ओकिनावाको बारेमा लेख हेर्नुहोस्। सामग्रीको तालिकाअरेन बीच （टोकाशीकी टापु, ओकिनावा ur फुरुजामी बीच （जामामी टापु, ओकिनावा ate हेट-नो-हमा （कुमे टापु, ओकिनावा） योनाहा मैहामा बीच （मियाकोजिमा टापु, ओकिनावा） सुनयमा बीच （मीकिमा Island टोक, ओकिनावामा टापु, ओकिनावा ish निशिहामा बीच （हेटरुमा टापु, ओकिनावा ha अहरेन बीच （तोकाशिकी टापु, ओकिनावा ha अहरेन बीच （टोकशीकी टापु, ओकिनावा A अहरेन बीचको टोकशीकी टापुको अहारिन बीच मुख्यतर्फ केरामा द्वीपको सबैभन्दा ठूलो टापु हो। ओकिनावा टापु। यो टापु एक गोल मा लगभग २ kilometers किलोमिटर पर छ। किनकि टोकाशीकी टापु ओकिनावा मुख्य टापुबाट 25० किलोमिटर मात्र टाढा छ, तपाईं एक दिनको यात्राको लागि जान सक्नुहुन्छ। ओकाइनावा मुख्य टापुको नाहा शहरको तोमारी बन्दरगाहबाट टोकशीकी टापुमा जानको लागि यो speed 30 मिनेट जति छिटो जहाजको “समुद्री लाइनर” बाट १ घण्टा १० मिनेट डुry्गामा रहेको छ। ...
जापानमा धेरै रोपवे छन्। यदि तपाईं रोपवेहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको यात्रा त्रि-आयामिक हुनेछ। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई केही लोकप्रिय रोपवेहरूको परिचय गराउन चाहन्छु जुन प्रमुख पर्यटक गन्तव्यहरूमा कार्यरत छ। सामग्री तालिका डेइसेट्सुजान (होक्काइडो) ओटारु (होक्काइडो) हाकोडाटे (होक्काइडो) जाओ (यामागाता) हाकोन (कानगावा) तातेयमा (तोयामा) शिन्होटका (गिफू) योशिनो (नारा) कोबे (ह्योगो) डेइसेट्सुआन (होक्काइडो) ...
मलाई उत्तरबाट जापानको प्रमुख हिमालहरूमा तिमीलाई परिचय गराउँछु। जापानको पहाडहरुको बारेमा कुरा गर्दा माउन्ट फुजी विशेष प्रसिद्ध छ। तर त्यहाँ अरू धेरै राम्रा पर्वतहरू छन्। ज्वालामुखी गतिविधि जापानी टापुमा प्राचीन समयदेखि नै जारी छ, त्यसैले विस्फोटले धेरै सहज र सन्तुलित पहाडहरू सिर्जना गरेको छ। माथि ...
जब तपाईं जापान आउनुभयो, तपाईंले सडकमा धेरै धेरै साना कारहरू देख्नुहुनेछ। यसलाई के-कारहरू (軽 自動 車, केइ कारहरू) भनिन्छ। जापानी किसान र साना व्यवसायका कर्मचारीहरू यी साना कारहरूमा हरेक दिन कडा परिश्रम गर्छन्। यी कारहरू कुनै पनि फेसन छैन। जे होस्, यी प्रतीकहरू हुन् ...